Public Health in Myanmar: Presumption of innocence
လူနာက ရောဂါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆရာဝန်ဆီပဲ ပုံအပ်တဲ့ အလေ့အထ ရှိတဲ့ မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက် Decision making မှာ လူနာတွေ ပါဝင်ရကောင်းမှန်း သိမှာ မဟုတ်သလို အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်လာတဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿာဟာလည်း လူနာရှင်မှာပါ တာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကို လက်ခံဖို့ အဆင့်ထိ နားလည်လိမ့်မယ်လို့ ကျွန်မ မထင်ဘူး။ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တိကျတဲ့ Clinical Practice Guideline ကို ကျန်းမာရေးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားတာ ရှိမရှိ ကျွန်မမသိဘူး။ တကယ်လို့ မရှိခဲ့ရင် အခု ဖြစ်သွားတာ Private facility ကလည်း ဖြစ်တော့ ဆရာပြောတဲ့ Procedure အတိုင်း လိုက်လုပ်ချင်မှလည်း လိုက်လုပ်လိမ့်မယ်။ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တဲ့ Procedure အတိုင်း မလုပ်ခဲ့ရင် ခွဲစိတ်ခံထားရတဲ့ လူနာတယောက်ဟာ Infection ၀င်ဖို့ သိပ်လွယ်ပါတယ်။ ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့ လူနာကို နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာ ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ လက္ခဏာက ဘာတွေရှိပြီး ဒီလက္ခဏာတွေ မရှိအောင် ဘယ်လိုကာကွယ်ရမယ်၊ တကယ်လို့ ရှိလာခဲ့ရင် လက္ခဏာ တွေ့တာနဲ့ ချက်ချင်း ဘာဆက်လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ လူနာကို Health care professional တယောက်ယောက်က Educate လုပ်ထားခြင်း မရှိရင်လည်း အခုလို ဖြစ်သွားဖို့က သိပ်လွယ်ပါတယ်။ နောက်တခုက ဆရာပြောတဲ့ အချက်အလက်တွေရဖို့ သတင်းတိတိကျကျ ဖေါ်ပြဖို့အတွက် သတင်းလိုက်ယူဖို့ မြန်မာပြည်မှာ သိပ်ခက်တော့ ရသလောက်ကို တင်လိုက်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အခုလို ဖြစ်သွားတာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မထင်တာ အားနည်းချက်ကတော့ သတင်းသမားမှာမှ မဟုတ်ဘူး ကျန်းမာရေး လုပ်သားတွေမှာလည်း ရှိမှာ အမှန်ပဲ။ ဆရာ အခုလို ထောက်ပြတာ ကျန်းမာရေး လုပ်သားတွေအတွက်ရော သတင်းသမားတွေ အတွက် နောက်ပိုင်း သတိပြုစရာဖြစ်လို့ သိပ်ကောင်းပါတယ်။
သဘောတူညီချက် (consent form) လက်မှတ်ထိုးတဲ့ ကိစ္စ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံမှာ လုပ်စရာတွေ အများကြီးရှိတာကို လက်ခံပါတယ်။
Clinical practice guideline (best practice guideline) တော့ ရှိတယ် မကြားသေးပါ။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော့် ဆွေးနွေးချက်မှာ အဲဒါကို ထည့်မပြောသွားပါ။
Medical negligence နဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာဆိုရင် မြို့နယ်၊ တိုင်းကျန်းမာ စတဲ့ ဌာနတွေက စုံစမ်းရေးဖွဲ့ စစ်ဆေးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒီ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့က အစီရင်ခံစာ မထွက်ခင်မှာ သတင်းအနေနဲ့ ဖော်ပြရင် အဖြစ်အပျက်ကိုသာ ဖော်ပြသင့်ပြီး မည်သူ့အပြစ်ဖြစ်ကြောင်း မဖော်ပြသင့်ပါ။
သတင်းလိုက်ရခက်လို့ ရသလောက်ကိုပဲ ဖော်ပြရင် သတင်းဟာ မမျှတနိုင်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြခြင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။
အင်မတန် စိတ်ဝင်စားဘို့ ကောင်းပါတယ်။ မီဒီယာတွေက ဆရာရေးသလို ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာ လုံးဝလက်ခံတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဘာမဆို လိုနေသေးတဲ့ ကာလမို့ အကောင်းဘက် ရောက်လာအောင် လုပ်ဘို့ဆိုတာ သတိကြီးကြီး၊ ဥာဏ်ကြီးကြီး၊ စေတနာပါပါနဲ့ လုပ်ကြရမှာပါ။ အပြုသဘောပါဘို့ လိုပါတယ်။
I support the reason u pointed out.
But for that surgeon, he should do blood for CP and USG before operation.These can be get within one hour in that specialist clinic although the clinical picture was exactly like acute appendicitis or even burst appendix.
Another thing is that he could change his way of treatment if post op diagnosis was not appendicitis. If he referred her back to the physician, the patient could be revived at that time according to proper guide line of DHF ( dengue hemorrhage fever ) if it was actually DHF.
But anyway in Myanmar lack of proper guideline and protocol and sometime unethical issues make doctors work effortless and take less responsibility for the actions they do
Dr htut min han said...
It is natural that doctors in Myanmar are placed in higher roles, and without doubt they enjoyarelatively respected life in the society. But on the other hand they are still the target in the sense of some media in the context of medical ethics. It is really miserable for the medical profession if their point of view is somewhat biased or too simplistic. The worse part of it is that the other party who persistently produces negative voices does not appear to have enough knowledge or idea about the medical ethics or medical negligence.
A very hot topic these days in Myanmar printed media about the medical profession is the mishap ofaninth standard girl who underwentasurgical operation and passed away with multiple organ failure on second post-op day.
The information is too limited while the attacks are too immense. It becameaspotlight in the media as this came to happen inawell-known private clinic and the surgeon on the other hand isarenowned one.
Yet who is responsible for the this unfortunate event? It is no doubt that the operating surgeon bears the greatest responsibility, but the next question is, ‘ Is there anyone else?’ Any operation isateam work comprising the surgeons, the assistant surgeons, the anesthetists, the assistant nurses, and so on.
On the very first step in such minor operation is the history taking and the physical examination by the surgeon to the patient. Beingasingle girl of 15, there is notahatful of differential diagnosis, neither isaseries of investigations nor imaging techniques. And it is only clinical diagnosis for the case of acute appendicitis. You may know the danger group for appendicitis, extreme ages, well consistent with the patient, which is an indication for immediate operation.
Sometimes the surgeon has to makeavery rapid diagnosis with his previous knowledge and experience. Such case does not require more thanafew minutes to reachaclinical diagnosis. The possibility ofadisease isamajor decisive factor in the approach to the patient in reachingacorrect and timely diagnosis.
Yet what is the role of anesthetist in such an unfortunate case? It is not clearly known who the anesthetist was, and what kind of anesthesia he or she used in the operation. Here the local or spinal anesthesia is relatively contraindicated, and if so the anesthetist himself should embrace more than half of the criticism.
And is there any role of the healers in the post-operative period? The quality of medical officers and the nurses attractsaseries of complaints in most of the private clinics. Where did the patient died, in the private room or in the ICU? It should be clearly known to the spectators in this spotlight issue.
Anyway the surgeon himself is not cent per cent guilty. He may not be perfect, yet he is not suchakind of medical doc who cares only for the green bucks.
Because he was and still is my teacher and my role model.
Please forgive me for my appeal, as there are many schools of thoughts in the Truth. Today is the age of plueuralism.
ဆရာရေ ကျနော် ဒီအဖြစ်အပျက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပိုစ့်အနေနဲက တင်ထားတာ ပိုစ့်လေးမှာ လင့်လေးရလို့ လိုက်လာကြည့်ပါတယ်။ ကျနော်က ဆေးပညာဗဟုသုတ သေချာမသိပါဘူး။ အခုဆရာ ထောက်ပြသွားတာလေးတွေက တော်တော်လေး အခြေခံကျပြီး ကောင်းမွန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာ့ သတင်းမီဒီယာကတော့ ဆရာလဲ နားလည်လောက်ပါတယ်။အမှန်က ခု ဖြစ်သင့်တာက ဆရာထောက်ပြတဲ့အတိုင်းပဲ အပြင်တကယ်မှာ လုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆို အတိုင်းထက်အလွန် ၀မ်းသာပီတိဖြစ်မိပါမယ်။ ဒါမှ တိုင်းပြည်အတွက် အကျိုးပြုတဲ့ ဆရာဝန်တယောက်ဟာ မှားယွင်းစွာ စွတ်စွဲခံရတာလား.. ဒါမှမဟုတ် တကယ်ပဲ မှားယွင်းပြီး အသက်တချောင်း ဆုံးရှုံးသွားခဲ့တာလား သေချာတဲ့ အဖြေတခုကို ရမှာပါ။ ဆရာဝန်တယောက်ဘက်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါဟာ ဆရာဝန်ရဲ့အမှားမဟုတ်သလို ပြည်သူဖက်က ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ ဒါဟာ အသက်တွေ အများကြီးကို ထိခိုက်စေမဲ့ လုပ်ရပ်တွေရဲ့အစပါပဲ။ ကျနော်လိုချင်တာကတော့ တရားမျှတတဲ့ အဖြေတခုပါပဲ။ ဆရာ သိတဲ့အတိုင်း ကျနော်တို့ တိုင်းပြည်မှာ ငွေရှိရင် ၊ နာမည်ကို ထိန်းလို့ရပါတယ် ဒါတွေကို တိုက်ဖျက်ဖို့က အဒီက အကျဆုံးပါပဲ။ ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေ အနေနဲ့ တကယ့်ကို တရားမျှတတဲ့ စီရင်ခွင့်မျိုး ချမှတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ တော်တော်လေးကို ၀မ်းမြောက်မိမှာပါ ဆရာရေ
Py@e Phyo said...
At the time I first heard this news, I was shocked by the sense of humanity but not by sense of law. Now, after reading this post I realized that we can't accuse anyone until he's proven guilty according to Law.So, let's discuss from the point of social view.
I've no point to discriminate that surgeon on personal matter
( such as financial motivation & so on ) as I don't even know who he is. He may be good-natured & well experienced surgeon but in this case ......
- We don't know clearly whether the blood & other essential tests were done or not & if the patient was in the state of shock or not so let's skip the preoperative condition.
- The prompt diagnosis is vital in case of acute abdomen & we can't get proper diagnosis in some cases because of limitation of diagnostic facilities & patients' condition so we can even accept the patient being operated with the wrong diagnosis of Appendicitis.
- But I'm quite sure that he knew that his diagnosis was wrong after the operation & he should proceed other procedures to get the proper diagnosis before it was too late for the patient's life. Even if he was too busy he must inevitably order others ( assistant surgeon or at least MO ) to do so. Even if he got the diagnosis of Dengue I do accept not every patient of Dengue can't be saved but why wasn't the patient treated according to Dengue treatment guideline. Don't you think the operation worsen the Dengue ?
Why was she infused glucose ?
- We have one medical saying ...
" Doctors have to treat the patient, not the disease " , so even if the diagnosis of appendicitis was true, his responsibility didn't come to end after dissecting the appendix. A surgeon is responsible until the patient's recovery.
I don't think the SSC would do further investigations & I don't think government would either unless the family take this cast to the court.
ပြန်လည် ရှင်းလင်း ထောက်ပြချက်များ မှန်ကန်ပါတယ်။ သတင်းရေးသား တင်ပြပုံဟာ အလွန်ညံ့ဖျင်းရုံမက စာနယ်ဇင်း ကျင့်ဝတ်တွေကိုပါ ချိုးဖောက်ထားတာပါ။ ကျင့်ဝတ်ချိုးဖောက်တာက လျှပ်တစ်ပြက်တို့ အီလဲဗင်းတို့အဖို့ ၀ဲထူမယား ဆိုသလို ကျင့်သားရနေတာ အတော်ကြာပါပြီ။ ကျနော့်အထင် မမှားရင် မကြာခင်မှာ ဆေးရုံဖက်က ဖြေရှင်းချက်ကို သတင်းလုပ်ပြီး ထည့်ဦးမှာပါ။ သဘောကတော့ နှစ်ဖက်ခွပြီး ငွေဖန်တာပါပဲ။ နစ်နာတာကတော့ လူထုတွေပါပဲ။ လူထုတွေ အချက်အလက် အသိအမြင် အမှန်အတိုင်း ရရှိဖို့ လွတ်လပ်တဲ့ မီဒီယာ ရှိဖို့ လိုသလို၊ အခုလို အဆိပ်ပင်တွေကိုလည်း ဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ လိုပါတယ်။ မလိုတမျိုး လိုတမျိုး ကိုယ်လိုရာကိုယ်ဆွဲပြီး သတင်း ပြူးတူးပြဲတဲတွေနဲ့ လုပ်စားနေတာကို စာဖတ်သူတွေကလည်း သဘောပေါက်ဖို့ သင့်ပါပြီ။
ဆက်လက် ပြီး ဒီလင့်ခ် ကို လာဖတ်တာပါ ..
ခေါင်းထဲမှာ စဉ်းစားစရာ တွေ အများကြီး
မှားယွင်းစွာနဲ့ ကို ဆရာဝန် ကို စွပ်စွဲတာလားး..
ဆရာဝန် ပဲ တကယ် မှားတာလား..
မိဘ ၂ ပါးသည်
သားသမီး စော နဲ့
သေချာ သိဖို့ လိုပါတယ် ...
သို့လော .. သို့လော နဲ့ ..
တရားမျှတစွာနဲ့ မည်သူ့ဘက်မှ မလိုက်
ဖြေရှင်း နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ..
စိုးရိမ်မှု့ ဆိုတာ ဖြစ်မလာပါ ..
Dr.Htut Min Han & Py@e Pyoe
ရေးထားတာတွေ လည်း ဖတ်သွားပါတယ် ..
After reading the original story, I really felt sorry for that girl. She was stillayoung girl. How about the future of her family members if she had family, children…………
I also feel really sorry for that girl. My grandma passed away of losing much blood after making emergency operation in the famous private clinic in the last4years ago, the responsible doctor could not come continuously for about6hours and didn't give the proper follow up instructions after doing operation knowing that all the blood are coming out continuously. Because of that my grandma passed away. One precious life is lost. I am not sure how many life are still losing on because of that kind of doctor! I couldn't sue that doctor cos I don't have enough money and time at that time and was still struggling in order to pay the expenses. I know some other cases and me myself have some experiences after I got terrible accident also.
My heart goes out to the family of the girl who left the world at suchayoung age. There is no doubt that it wasagreat loss. May she rest in peace.
However, it is not acceptable for the media to stir things up by using the 'emotive words' of the bereaved family (they should be givenaquiet time to mourn for their sad loss, not to be interviewed by many strangers at this stage) and putting all the blame to one person.
These things need careful investigation. The regulatory body has to see all the documents (if there are any) related to the alleged incident and interview all relevant people who are prepared to give evidence of things as they happened. It is vital to bear in mind that verbal evidence from recalled memory is prone to bias. The prosecution needs to prove that there wasa'direct causal link' betweenaparticular action and the death. Otherwise, it is not medical negligence.
The problem here, I think, is that these two journals (I don't intend to generalise and judge the whole profession of news media and journalism) have exploited the long-standing frustrations of the public towards the health care system (and beyond) and presented the story inacertain light rather than being objective and factual. It is always easy to findascape-goat and point the fingers but this does not provide the right solution to the problem.
It is my opinion that this isaterrible thing to happen to anybody and yet we should utilise this asavaluable lesson to make things better once and for all. Do we learn from our painful experiences constructively? That is what we need to ask ourselves.
The clinical practice in our country needsamajor shake-up. Patients should be empowered and trained to get involve in informed decision making. Medical and nursing professionals should start keeping good records which are to be held for years.
Doctor-patient relationship relies significantly on trust and this needs to be maintained by mutual respect, understanding, co-operation and transparency.
Thank you, Ko Ye-Mon for initiatingatopic which needs serious attention and debate. I wish we all are given an opportunity to contribute positively to the betterment of our society, before it is way too late!
ကျန်းမာရေးပိုင်းကနေ လူနာများ အဖိတ်အစင်မရှိအောင် ဆရာ DTS ပြောသလို အပြုသဘောဆောင်ပြီး ဆွေးနွေးကြတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အစိုးရက ပုဂ္ဂလိက ဆေးရုံများ တရားဝင် ဖွင့်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်လို့ အလားတူ ကိစ္စရပ်များ နောက်ပိုင်းမှာ ဆက်ပြီး ကြားလာနိုင်စရာရှိပါမယ်။ အဲဒီအခါမှာ စာနယ်ဇင်းများက မျှမျှတတ ရေးသားရင်း ပြည်သူများကို အသိပေးပါလို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။
actively appreciate your post. we haveahuge population who does not try to understand their own status and privileges but is very active to findascapegoat if in trouble. all parties concern are only focusing on their own benefits. we need to educate our nation in every ( every ) corner, whether it may be health, education, discipline, patriotism, etc.
ဂျာနယ်မှာဖော်ပြထားတဲ့ လူနာရှင်ရဲ့ စကားတွေဟာ 100% မှန်ပါတယ်.. ကျွန်မအမက လက်ရှိ SSC မှာထိုင်နေတဲ့ ဆရာဝန်ပါ.. ကျွန်မအဖေက ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးရုံးကပါ.. ဒီကိတ်စမှာ ဆရာဝန်မှားသလား လူနာရှင်ပိုပြောသလားဆိုတာ ခုလက်ရှိ SSC မှာထိုင်နေတဲ့ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် နပ်စ်မတစ်ယောက်ယောက်ကို မေးကြည့်ရုံနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်..
လူနာရှင်က ခွဲစိတ်ရန်သဘောတူကြောင်းလက်မှတ်ထိုးမှ ခွဲတယ် ဆိုတာ မှန်ပါတယ်..
ဒီကိတ်စမှာ အူအတက်ပေါက်ပါတယ်လို့ ဆရာဝန်က ပြောနေမှတော့.. လူနာရှင်က မခွဲဘူးလို့ ပြောမှ မဟုတ်ဘာဘူး.. ဒါဟာ ဆရာဝန်ကို ပုံအပ်တာလဲ မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်. အခု မြန်မာနိုင်ငံက ဘယ်ဆရာဝန် ဘယ်နပ်စ်ကမ လူနာရှင်ကို စကားလေးလုံးကွဲအောင် ရှင်းမပြကြပါဘူး.. ဒါက အပြင်ဆေးခန်းပါ .. အစိုးရဆေးရုံမှာတော့ ပြောမနေပါနဲ့တော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆရာဝန်လုပ်နေတဲ့ လူတွေ အကုန်သိပါတယ်.. မသိချင်ယောင် ဆောင်နေကြရင်တော့ မပြောတတ်ပါ..
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့က အထူးကုဆေးခန်းတွေကို တရားဥပဒေနဲ့အညီ လုပ်ကိုင်စေချင်ပါတယ်.. ဒီလိုမှားယွင်း သွားတဲ့အတွက် ပထမဦးဆုံးတာဝန်ရှိသူတွေက ဆရာဝန်တွေပဲ သူတို့က လူနာရှင်တွေကို သေသေချာချာရှင်းပြသင့်တယ်..သူတို့က ငါတို့က သိတယ် တတ်တယ်ဆိုပြီး လူနာရှင်တွေကို ရှင်းပြစရာမလိုဘူးလို့သဘောထားတယ်..ရှင်းပြရင်းလည်း ဘာမဟုတ်တဲ့အကူ Nurse တွေကိုပဲရှင်းပြခိုင်းတာများတာ...အထူးကု
ဆေးခန်းတွေနဲ့ပက်သက်ပြီး Media စာမျက်နှာတွေမှာ အမြဲတမ်း ဖော်ပြနေတာပဲ.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဒါမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူး.. ဒီကိစ ကို လူသိရှင်ကြားဖြေရှင်းပေးစေချင်တယ်....
သတင်း Media တွေက သေသေချာချာ ဖော်ပြပေးစေချင်တယ်...
နံပါတ်တစ်ကတော့ ဂျာနယ်က သူ့တာဝန်ကိုသူထမ်းဆောင်လိုက်တာကို ဆရာသမားက စည်းဘောင်လွတ်ချင်းလို့ခေါင်းစဉ်တပ်လိုက်တာတော့သိပ်မဟန်ဘူးနဲု့တူတာ။ အဲဒီလိုပြောလိုက်ကတည်းက ဆရာသမားကိုယ်တိုင် စည်းဘောင်လွတ်သွားတာပါပဲ။
နံပါတ်နှစ်ကတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာတစ်ကယ်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ။ ဒါပေမယ့် ဂျာနယ်တွေမှာသာဖေါ်မပြဘူးဆိုရင် ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့သိနိုင်ပါ့မလား။ (ဒီလို့အဖြစ်အပျက်တွေ လူမသိသူမသိ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ တွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်ခဲ့တယ်နော်) ခုမှဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာတာ။ ဂျာနယ်တွေကြောင့်ပေါ့။
နံပါတ်သုံး ကတော့ မိခင်က သားသမီးဇောနဲ့ စွတ်စွဲတာ ပြောဆိုတာလို့သုံးနှုန်းလိုက်တာကို ပြောချင်ပါတယ်။ လူနာရဲ့မိခင်ပြောတာတွေကို ပြန်ဖတ်ကြည့်စေချင်ပါတယ်။ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ။သဘ၀ကျကျပြောသွားတဲ့လေသံလို့ခံစားရပါတယ်။ခင်ဗျားတို့လည်း လူသားရင်ဘတ်နဲ့ ခံစာုးကည့်ရင် သိပါလိမ့်မယ်။
အလားတူအဖြစ်အပျက်တွေလည်း ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အဲဒီလို ဖြစ်လာရင် ပိုကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
သတိထားဖို့တစ်ချက်က SSC ဟာတန်ဖိုးမြင့်ဆေးရုံဆိုတာမမေ့ပါနဲ။ဆေးခန်းလို့နာမယ်တတ်ထားပေမယ့်လည်း ဆေးရုံပါပဲ။
ဆေးရုံ့တို့ဆရာဝန်တို့ဟာ သူတို့ေုကာင့်လူနာတွေ လူနာရှင်တွေ နစ်နာတာတွေကို ထူတ်ပြောမယ်ထင်သလား အစဉ်အလာမရှိတာကို သတိထားစေချင်ပါတယ်။
မြန်မာပြည်မှ အနာတစ်ခြား ဆေးတစ်ခြားဖြစ်ပြီး ဆရာဝန်ရဲ့ ပေါ့ဆမူကြောင့် လူနာအသက်ဆုံးရတဲ့ အဖြစ်တွေ အများကြီး ရှိခဲ့ဖူးတယ်..ဥပမာအနေနဲ့ ပြောရရင် ကျွန်မ အဖေ ညနေတိုင်း အဖျားတက်ပြီး နေမကောင်းတာကို ဌက်ဖျားရှိတယ်ဆိုပြီး ဌက်ဖျားဆေးတွေ တိုက်ပီး နောက် လတော်တော်ကြာမှ တီဘီဖြစ်တယ်ဆိုပီး တီဘီဆေးတွေ ပြောင်းတိုက်တယ် ..နောက်ဆုံးကျတော့ ကံကောင်းလို့ လူမသေတယ် ပြောချင်တာက မြန်မာပြည်ကပြည်သူတော်တော်များဟာ ဆရာဝန်ကို မျက်လုံးစုံမှိတ်ပြီး ယုံကြည်ကြတယ်.. အားကိုးကြတယ်.. သူတို့အဆုံးအဖြတ်ကသာလျင် လူနာရဲ့အသက်ကို တာဝန်ယူနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်..ကျွန်မယူဆချက်ကတော့ မိဘဘက်က သတင်းတက်လာရင် ဆရာဝန်ဘက်ကလဲ ခိုင်လုံတိကျတဲ့ သက်သေသက္ကာယနဲ့ ပြန်ဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့ ထင်တယ်.. မြန်မာပြည်မြှ ဒီလို သတင်းမျိုးကို ဖော်ပြခွင့်ရလာတာတော့ ကြုံတောင့်ကြုံခဲပဲ စာပေစိစစ်ရေးက ဘယ်လို ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ပွဲဆူအောင် ခွင့်ပြုခဲ့သလဲဆိုတာတော့ ဒီကင်ပေတိုင်တွေပဲ သိလိမ့်မယ်..
ရိုင်းသွားရင်လည်း ခွင့်လွှတ်နိုင်ပါတယ် ဒါပေမယ့် post ကို သေချာမဖတ်ဘဲ (ဒါမှမဟုတ်) သေချာနားမလည်ဘဲ ၀င်ဆွေးနွေးတာတော့.........
၁. သတင်းသမားဟာ သတင်းကိုဘဲ ရေးရပါတယ် တရားဥပဒေ မဟုတ်ပါဘူး ၀င်ရောက် မဆုံးဖြတ်နိုင်ပါဘူး (သတင်းဆောင်းပါး ဖြစ်ခဲ့ရင်တောင်မှ) ခုတော့ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဂုဏ်သရေရှိလို့ နာမည်တပ်လေ့ရှိတဲ့ tabloid ကြီးတွေက တရားမျှတမှုကို မူပိုင်ယူပစ်လိုက်တာပါ လျှပ်တပြက်အကြောင်းကလူတိုင်း သိမှာပါ Eleven ကလည်း ပြောရင်တော့ မီဒီယာဆိုတာက ဘက်မလိုက်ရဘူးက စပါတယ် ပြီးရင် သူတို့အလိုရှိတဲ့အထိ သတင်းကို ပုံဖော်ပါတယ် မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦးဆိုပြီး ရေးပါတယ် ဆန့်ကျင်ဘက်အမြင်များ ပါရိုးထုံးစံ မရှိခဲ့ပါ
၂. post နောက်ဆုံးမတိုင်ခင် အပိုဒ်မှာ ရေးသူက "ဤဆောင်းပါး နှစ်ပုဒ်၏ ကောက်ချက်များနှင့် Prejudice ( ဥပဒေ ရှေ့က တင်ကြိုအဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်း ) တို့ကို လုံးဝ သဘောမတူ စေကာမူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်သည်ကိုတော့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါသည်။" ဆိုပြီး အမြင်ကို ပြောထားပါတယ် (စကားစပ်လို့ ပြောရရင် ဂျာနယ်သမား ဒီလိုသတင်း မရေးလို့ ဘာရေးရမှာတုန်း... သိပ်ပီး ကျေးဇူးတင်ချင်သေးရင် စာပေစိစစ်ရေးကို အုန်းပွဲနဲ့ သွားလိုက်ပါ)
၃. "မိခင်က သားသမီးဇောနဲ့ စွတ်စွဲတာ ပြောဆိုတာလို့သုံးနှုန်းလိုက်တာ" ဘယ်သူ ရေးလိုက်ပါလိမ့် အမှန်က ဒီနေရာမှာ emotional ဖြစ်မဖြစ်က အရေးမကြီးပါ။ ဖြစ်လည်း ဖြစ်ခွင့်ရှိပါတယ်။
(မြန်မာပြည် blogger လောက အကျိုးမရှိသော commentများနှင့် ကင်းဝေးပါစေ ဒီလိုcommentတွေ စိတ်ကုန်လှပါဘီ)
I just wondering why the surgeon was not in Yangon when this case happened.
How can we called it if it is not surgeon responsibility to take care of his patient post operation period.
If it is not surgeon responsibility why the hospital not issue the explanation against the journel.
ကျွန်တော်ဆွေးနွေးချက်များကို အသေအချာဖတ်ပြီမှ ဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်။တုန့်ပြန်ချင်းမဟုတ်ပါ။
1.သတင်းသမားသည်သတင်းကိုရေးပြီး သူတို့အာဘော်ကိုတင်ပြသွားခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ဆေးရုံအမည် နှင့် ဆရာဝန်ုကီးအမည်တို့ကိုဖော်ပြခြင်းမရှိပါ။စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်အေုကာင်းဂဃနဏမသိသောေုကာင့် ဖြင့်လည်မဆွေးနွေးလိုပါ။ သို့သော် သူတို့သည်စေတနာကို ထည့်သွင်းထားသည်ကိုတော့ သတိထားသင့်ပါသည်။ ထိုစေတနာသည် အားလုံးအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ အထူးသဖြင့်လူနာများနှင့်လူနာရှင်များအတွက်ဖြစ်ပါသည်။ထင်သာမြင်သာသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုကိုအရင်းတည်ကာ မီးမောင်းထိုးပြသွားချင်းသာဖြစ်ပါသည်။
2. ဆရာသမားပြောတဲ့ သတင်းသမားဒီသတင်းမျိုးမရေးလို့ဘယ်သတင်းမျိးရေးမှာလဲ ဆိုတာကတော့ သိပ်မဟုတ်သေးပါ။ နည်းနည်းစော်ကားသလိုဖြစ်နေသည်ဟုထင်ပါသည်။ဒီလိုသတင်းမျိုး (အမှတ်မမှားရင်)ယခင်က မထည့်ုကပါ။ယခုမှသာ ဖတ်ရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
3. မိခင်ထံမှသတင်းသည်လည်းခိုင်မာသောသက်သေတစ်ခုဟုယူဆပါသည်။မိခင်သည်ဆေးရုံနှင့်ပတ်သတ်ပြီး အများဆုံးဆက်ဆံနေခဲ့ရသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ အကျိုးမရှိသော Comments ဟုသုံးသွား ခြင်းကိုပြောချင်ပါသည်။ မှန်ပါသည်။ဆရာသမားအတွက်တော့အကျိုးမရှိနိုင်ပါ။
ဆရာသမားအနေနှင့်စိတ်ကုန်နေလျင်မဖတ်ပါနှင့်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဆရာသမားကိုစိတ်ကုန်သွားသဖြင့် ၀င်ေ၇ာက်မရေးတော့ပါ။
တရားဥပဒေ၊ ဆေးပညာ၊ မီဒီယာကိုသိပ်နားလည်လှချည်ရဲ့တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ထက်ပညာရှိ၊၀ါရှိတဲ့လူကြီးများနဲ့ဝင်ဆွေးနွေးဖို့ဆိုရလောက်အောင်လည်း မကြွယ်ဝသေးပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သေသွားတဲ့ကောင်မလေးသာ ဒီဆောင်းပါးကိုရေးတဲ့ ဆရာရဲ့ သမီးလေးသာဖြစ်ခဲ့မယ်ဆို ဆရာဒီလိုစေ့စေ့ပေါက်ပေါက်စဉ်းစားပြီး ရေးနိုင်ပါ့မလားဆိုတာလေးတော့ သိချင်ပါတယ်။
Latt Thakhin said...
ဆရာပြောတာ ထောက်ပြတာကို သဘောတူပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗမာပြည်က မီဒီယာ အလုပ်အကြောင်းလေး ပြောချင်ပါတယ်။ ဒီသတင်းက တဖက်တည်း ဖြစ်နေတာ ဟုတ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ လူထုအော်သံ၊ အယ်ဒီတာ့ထံ ပေးစာ ဆိုတဲ့ သဘောပါ။ သတင်းအဖွဲ့က ၂ ဖက် အသံပါရမယ် ဆိုတာကို နားလည်ပါတယ်။ ကြိုးလဲ ကြိုးစားကြည့်မယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။ ဒေါက်တာ ခင်မောင်ဝင်းကိုလဲ သွားမေးထားတယ်။ တတ်နိုင်သလောက် သူတို့ အတည်ပြုဖို့ ကြိုးစားမယ်လို့ သတင်းသမားဖြစ်တဲ့ ကျမ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဗမာပြည်မှာက တခုခု ဖြစ်လာရင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ဆိုတာကလဲ ဖုံးမနိုင်ဖိမရ ဖြစ်မှ ဟန်ပြစစ်တာ။ စာရင်းဇယား ဆိုတာကလဲ သိကြားမင်းကို သွားတောင်းရမလို။ အခုလို အကြောင်းအရာ တခုဟာ အန္တရာယ်ကြီးမှန်း သတင်းသမားတိုင်း သိကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဆရာသိတဲ့ အတိုင်း ဗမာပြည်မှာ သတင်းကို ဘက်ညီ သတင်းဖြစ်ဖို့ အင်မတန်မှ ခက်ခဲပါတယ်။ တကယ်တော့ ဒါဟာ ကျန်းမာရေး ၀န်ကြီးဌာနက စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီး လူထုကို ရှင်းလင်းရတော့မှာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျမသိသလောက် ဗမာပြည်မှာ ပြည်သူလူထု ဘာဖြစ်ဖြစ် အစိုးရက အရေးလုပ် ရှင်းတာ မတွေ့ဖူးပေါင်။ မီဒီယာတွေကတော့ စနစ်တကျ စုံစမ်းစစ်ဆေးလို့ အဖြေထွက်လာလို့ မှားတယ် ဆိုရင်လဲ အယ်ဒီတာ အဖွဲ့က တောင်းပန်ဖို့ အဆင်သင့်ဘဲလို့ ကျမ ယုံကြည်ပါတယ်။
မင်းရဲ့ သား(သို့)သမီးကို အဲံဒီဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာ
ပထမဆုံး ပြန်ပြီး ဆွေးနွေးလိုတာက လူမှုရေးရှုထောင့် (social perspective) အမြင်ကို ကျွန်တော့် ဘလောက်ပို့စ်မှာ မရေးခဲ့ပါ။ မိမိအမြင်ကို အကျဉ်းရုံးပြောရမည်ဆိုလျှင် လူနာရှင် မိသားစုဟာ မိမိရဲ့ မိသားစုဝင်တစ်ဦး - သမီး၊ အစ်မ၊ ညီမ တစ်ယောက် ဆုံးရှုံးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အစားထိုးလို့ မရနိုင်တာ သေချာပါတယ်။ ဒါကို လုံးဝ စောဒက မတက်လိုပါ။
ဘလောက်ပို့စ်၏ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဥပဒေရှေ့ကနေ တင်ကြိုအဆုံးအဖြတ် မပြုသင့်ကြောင်း ကိုဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။ ရှင်းအောင်ပြောရလျှင် သတင်းတင်ပြပုံကို ဝေဖန်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ စွတ်စွဲသူနဲ့ စွတ်စွဲခံရသူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် ရှိလာရာမှာ တစ်ဖက်တည်း၏ အယူအဆကိုချည်းယူကာ သတင်းတင်ပြသွားခြင်းက မမျှတနိုင်ပါ။
ထို့ထက်ပို၍ အရေးကြီးသည်ဟု ကျွန်တော်ထင်သော ကိစ္စမှာ ကျန်းမာရေး အဆင့်အတန်းမြင့်လာစေဖို့ အတွက် လူတိုင်း ( ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများသာမက၊ လူနာ နှင့် လူနာရှင်များ၊ မီဒီယာများ ) ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့်ရှိစေရေးဖြစ်ပါသည်။ အခု ဘလောက်ပို့စ်တွင် မှတ်ချက် ၂၀ ကျော် ရေးသားလာကြခြင်းမျိုးသည် လူတိုင်း ပါဝင်ခွင့်ရှိကြောင်းနှင့် ပါဝင်လိုကြကြောင်းကို ပြနေသည့် အကောင်းဆုံး သက်သေပင်ဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းကို နောက်ထပ်ပို့စ်တွင် အကျယ်ဆွေးနွေးပါမည်။
Firstly, I don't think it is notaright time to blame journals for not compliance with law and regulation to make justification. Instead we have to welcome its hard work to make appear this kind of sad story in public awareness.
I believe your post shall pursuade public attention to be deviate from root cause of the sad loss.
It is only the tip of the ice. We have heard quite lots of similar sad stories through the painful victims who did not speak as loud as it is now.
Don't try to pretend not to know the real situations in our community in Myanmar regarding health cares.
အခုကိစ္စကို သေသေချာချာ ဖတ်ကြည့် စဉ်းစားကြည့်ပါတယ်။ သာမန်အရပ်သားတွေ အနေနဲ့ ထင်မြင်ပြောဆိုချက်တွေ ဖြစ်နေပါတယ်။
တကယ့် ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင် နားလည်သူတွေရဲ့ တရားဝင် စုံစမ်း စစ်ဆေးမှုတွေ မတွေ့ရတာကြောင့် အဖြစ်အပျက် အမှန်ရယ်လို့ မှတ်ချက်ချဖို့ခက်နေပါသေးတယ်။ မနက်ဖန် ၂၆-၁၁-၁၀၀၉ မှာ မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီမှာ အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အရေးပေါ် အစည်းအဝေး ထိုင်ပြီး လိုအပ်သလို စုံစမ်းစစ်ဆေးသွားမယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဆေးပညာမှာ လိုအပ်တဲ့ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်၊ လိုက်နာကျင့်သုံးရန် စည်းကမ်း၊နည်းလမ်းတွေဟာ အတိအကျ ရှိပြီးသားပါ။ တကယ် ပေါ့လျော့ မှားယွင်း အရည်အချင်း မပြည့်မီ မှုတွေကို ဆုံးဖြတ် အရေးယူ နိုင်တဲ့ ဆေးကောင်စီလည်း ရှိပါတယ်။ တစုံတရာ အသေအချာ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက် မရှိသေးပဲနဲ့ ဆရာဝန်အမှားကြောင့် ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုး ကို မသုံးသင့်ကြပါဘူးလို့ မေတ္တာရပ်ခံလိုပါတယ်။ မီဒီယာရဲ့ကောင်းမှုကြောင့် အခုကိစ္စဟာ အတော်ပြန့်နှံ့သွားပြီမို့ အမှန်တရားကို ထုတ်ဖေါ်ဖို့ ပိုသတိရှိကြမယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ တကယ်လို့များ ဆေးပညာရဲ့အတိအကျ ပြဌာန်းထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေ အရ အပြစ်တစုံတရာ မရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရင်ကြိုတင် ကောက်ချက်ဆွဲ ထင်မြင်ထားမှုတွေဟာ ပညာရှင်တွေကို ထိခိုက်နာကြင်စေခဲ့တာမို့ ဘယ်သူတွေက ဘယ်လောက်တာဝန်ခံ ဖြေရှင်းပေး ကြမလဲ စဉ်းစားဆင်ခြင်စေချင်ပါတယ်။
လူနာရှင်ရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ် ခံစားရတဲ့ ဖြေမဆည်နိုင်မှုကို ခံစားနားလည်မိသလိုပဲ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးပညာအပေါ် အယုံအကြည် လုံးဝ ကင်းမဲ့ သွားတာမျိုး၊ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် မကုတော့ဘူး၊ အိမ်မှာပဲ အသေခံတော့မယ်ဆိုတဲ့ အဆင်ခြင်မဲ့ တရားသေ ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ကြတာမျိုးတွေကို ကြားတွေ့ရလို့ စိတ်မကောင်းစရာပါပဲ။
Primum non cere said...
ဆွေးနွေးမှုတွေ ဖတ်ရတာ ကောင်းပါတယ်။ ထူးခြားမှုကတော့ ဆေးပညာကျင့်ဝတ်ကို အငြင်းပွားတဲ့ ကိစ္စမယ် ထောက်ပြတဲ့ စာနယ်ဇင်း တွေရဲ့ ကျင့်ဝတ်ကိုပါ ပြန်သုံးသပ်ရမလို ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စပဲ။
၁)ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု စနစ်ကြီးမှာ ဟာကွက်တွေရှိနေတယ်။
၅)ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဆွေးနွေးချက်တွေဖတ်ခွင့်ရလို့ ဆရာတက္ကသိုလ်လှမွန် နဲ့ ကွန်မန့်ရှင်များကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
To others/(ယခုရေးသားနေသည်များမှာ မူရင်းဆောင်းပါးရှင်၏ ရည်ရွယ်ချက် "တိုင်းပြည်၏ မျက်စိနှင့် နားသဖွယ်ဖြစ်သော
သတင်းမီဒီယာအချို့၏ သတင်းဆောင်းပါး ရေးသားသူများက ဥပဒေရှေ့က တင်ကြို၍ အဆုံးအဖြတ်ပေးနေခြင်းသည်
တရားစည်းဘောင်လွတ်နေကြောင်း"ကို ထောက်ခံနေခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးပညာကျင့်ဝတ်ကို၊ အပြစ်ကျူးလွန်သည်ဟု
စွပ်စွဲထားသော ဆရာဝန်နှင့် ဆေးရုံကို ကာကွယ်ရေးသားနေခြင်း လုံးဝ (လုံးဝ) မဟုတ်ပါ)
To moestar :)/ ၃.အချိန်မယူဘဲ အရေးအသား လောကြီးသွားသဖြင့် တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ မိခင်၏ စကားကို သက်သေအဖြစ် မယူနိုင်ဟု
မရေးခဲ့ပါ။ "မိခင်က သားသမီးဇောနဲ့ စွတ်စွဲတာ ပြောဆိုတာ" ဟူသော ဆောင်းပါးရှင်၏ မူလ ရေးသားထားချက်အပေါ်ဝေ ဖန်ထားသဖြင့်
မည်သည့်နေရာတွင်မှ ရှာဖွေမတွေ့ခြင်းပါ။ ရှာဖွေပေးပါခင်ဗျား။ (hearsay evidence ကို ဆက်လက်စစ်ဆေးရမှာက သက်သက်ပါ law court
၂.ဟုတ်ကဲ့။ မထည့်ခဲ့ကြပါ။ ရှေးအဆက်ဆက် သတင်းသမားများ မထည့်ချင် မနေပါ။ စိစစ်ရေးက ခွင့်မပြုခဲ့ပါ ခင်ဗျား။ ထိုကြောင့်
ကျေးဇူးရှင်ကင်ပေတိုင်ကို မမေ့သင့်ကြောင်း နှိုးေ ဆာ် ပေးရခြင်းပါ (သတင်းဂျာနယ် အားလုံးကို သိမ်းကျုံးပြော နေခြင်း မဟုတ်ပါ။ မနက်စောစော
ပြေးဝယ်ရသော ဂျာနယ်အချို့ ရှိပါသည်)သေချာစဉ်းစားကြည့်လျှင် စောင်ရေကောင်းကောင်းတက်မည့် အခွင့်အရေးပါ။
၁.စာနယ်ဇင်းမှာလည်း စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်ရှိသည်ဟု တော့ ဆရာလူထုစိန်ဝင်းရေးသားမှုကို မကြာခဏ ဖတ်ဖူးပါသည်။ (Ironically, some of
those columns were in the pages of Weekly Eleven) ထဲထဲဝင်ဝင်လေ့လာဖို့တော့ မိမိ profession မဟုတ်ပါ။ အာဘော်၏ လွတ်လပ်မှု
အကျဉ်းအကျယ်ကတော့ မိမိလိုသလို ချုံ့ချဲ့ နေုခြင်းပါ။ အမှန်တော့ အာဘော်ကို အချက်အလက်များကို ပညာညဏ် ဆင်ခြင်ညဏ်ဖြင့်ခြုံငုံ
သုံးသပ်ထားသော ထင်မြင်ချက်ဟု ယူဆပါသည်။ သည်တွင်လည်း ရေးသားသူ၏ အရည်ပြည့်ဝမှုက အရေးကြီးပါသေးသည်။
ယခုကိစ်စတွင်လည်း စကားကြီးစကားခန့်များကို ဖယ်ရှားပါက "ဆရာဝန်တွေ အကျင့်ပျက်နေတယ် ဒီဒေါက်တာကိုကြည့်" (နာမည်မပါတာပါတာ
မထူးခြားပါ သနားစရာ ကလေးမ၏ နာမည်အပြည့်အစုံပါပါသည်) ဆိုနေုခြင်းကြောင့်ပါ။ပြောသင့်တာက ကိစ်စအားလုံးရှင်းလင်းသွားမှ
"ဆရာဝန်တစ်ချို့ medical ethicsနဲ့ မညီပါ ဟိုပစ်ဒဏ်ချခံလိုက်ရတဲ့ ဆရာဝန်ကို ကြည့်ပါ ဒီထက်တိကျတဲ့ regulations တွေ ရှိသင့်ပါပီ"
ဆိုတာမျိုးပါ။ သတင်းအဖြစ်ထည့်သင့်ပါသည် မျှတသောသတင်းတစ်ပုဒ်အဖြစ်ပါ။ ဆရာဝန်တချို့(မဟုတ်လျှင်လည်း အများစု)
စိတ်ကုန်သွားသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မူရင်းပို့စ်တင်သူ၏ စေတနာကို မမြင်မကန်း ရိုင်းစိုင်းမှုအတွက် ထိုက်တန်ပါသည်။ ပထမစာပိုဒ်၏
အချိန်မရလိုက်ခြင်းနှင့် မူရင်းအရေးအသား၏ tone & colorကိုထပ်တူကျအောင် ကူးယူရခြင်းကြောင့် အထိအငေါ့များပါသွားပါက
ကျန်စာဖတ်သူများ တောင်းပန်အပ်ပါသည်။ အားလုံးကို ဒေါသမသင့်စေလိုပါ။
၀င်ရောက်မရေးသားတော့ခြင်းအတွက် ၀မ်းမြောက်ရပြန်ပါသည်။ လူကြီးမင်း၏ အခွင့်အရေးကိုတော့ မပိတ်ပင်လိုပါ။
ဆက်လက်ရေးသားလိုပါကလည်း ဆေးပညာနှင့် ဥပဒေရေးရာများ လေ့လာကာ ရေးသားနိုင်ပါစေ။
တကယ်လို့ ဆရာသာ စာနယ်ဇင်း သမား တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီလိုသတင်းမျိုးကို ဆရာ ဘယ်လိုများ တင်ပြမှာလဲ သိချင်ပါတယ်...
ှဆရာတင်ပြသလို အချက်အလက်တွေရအောင် ဆရာ စာနယ်ဇင်းသမား တစ်ယောက်အနေနဲ့ လုပ်နိုင်ပါ့မလား...ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ စာနယ်ဇင်း သမား အခုလိုရေးသားတင်ပြလို့သာ...ဆရာဖြစ်စေချင်တဲ့ ရှုထောင့်များကနေ သက်ဆိုင်ရာက သိရှိပြီး လုပ်ဆောင်ုကမယ် ထင်ပါတယ်...သူသာ ဒီသတင်းကို မတင်ပြခဲ့ရင် ...ဘယ်လို ပြီးသွားမယ်ထင်ပါသလဲ ဆရာ......
I want to point out the incident based on the facts I have read from her mother.
Thirdly, the surgeon came to see her in post operative period only once even though her condition was extremely and unexpectedly deteriorated. It should be the multi-involving team management.
That case should be properly conducted and questioned to proceed the enquiry to find out the cause. But it seemed to be doctor's.
In terms of Journalism, I think they should ask and interview almost everyone involving in the incident as you said.
However, the words they mentioned in the article are those the mother said. I think it was reasonable for the ethics and they should mention the sufferer's feelings publicly.
The fact is that there is no place to complaint and no proper laws for the misconduct in Myanmar. If there is, the future incident can be protected by taking count from them and making protocols for doctor treatment.
Thaung Htike said...
I wonder if that facility is certified to operate asahospital. The hospital in-patient service is way different than outpatient clinic. Such an incident would happen if there are inadequate staffing or proper facility for the post-operative care.
မျှမျှတတ တွေးခေါ်ဆင်ခြင်တတ်မှု၊ ဗဟုသုတ နည်းပါးမှု၊ မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တွေ မပြည့်စုံသေးတဲ့ ဒီလောကကြီးရဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာ အကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေတာ မဆန်းကြယ်ဘူးလို့ ယူဆထားနိုင်မယ်ဆိုရင် ဖြေသာနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်
Tatkatho Hla Mon has been absolutely clear in delivering his opinion and also made it seem to have holdingafair view over this issue. But let's face the reality. We all know the limitations the media faces in our country. We all know how doctors treat their patient.As the watchdog of society, it's their responsibility and if the media doesn't point out this sickening event, how would people know of this? I believe that it's time we find the root cause of this and get rid of the problem. Is media, based on mere bias, deliberately attacking medical doctors? Do majority of doctors not deserve this critism? How many specialists practise not giving enough time for history taking and diagonosis? Are they majority? In public hospitals, doctors(in general) really care about their patients? My personal experience suggests me disgusting truth about the questions posted above.
Please find what I have posted yesterday inadiscussion.
"This is really sick. There should beamechanism monitoring this kind of irresponsible practice by doctors. In general,medical doctors especially so-called specialists in our country are very arrogant and just seeking for money with no or little consideration for their patients whom they consider justamoney-resource. It broke my heart to find out about this sad loss ofavaluable life by total negligence ofastupid doctor. IT'S A HUMAN LIFE for goodness sake! Sue him! It's not about revenge, it's about justice and about creating awareness of this sad reality in our country. My deep condolences to the grieving family. Rest In Peace little sister Khine Shoon Lei Yi. I'm terribly sorry.It's everyone's responsibility to fight and win this fight. It's not only the grieving family's fight/problem. It's OUR fight and our problem and we need to bringasolution and justice to this. Bring Justice to This! Journalists,Bloggers comrades, be responsible! Write, cry, grieve, mobilize people and fight! End this sad reality!"
Patients are our customers, in fact, without them, doctors cannot survive. Customer is always right and doctors must comply with it. I hope to deliver this message to our doctors. that's all
The surgeon neglected the patient. In fact, this is not the new story. Most specialists don't give enough time for patients. When these specialists were young, they may want to becomeacaring and warm hearted doctors but environment changed them all. What people missing is professionals with such as FRCS or MRCS get5digit income in developed countries. So specialists in our country will also want to get the income to such degree. But they are in health care service and their actions have collateral damages upon our poor community.
Unethical and negligence issues are happening in all sectors in our countries. But why hand pick health industry?
ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံဆေးကောင်စီက ရွှေဂုံတိုင်အထူးကု ဆေးခန်းမှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အစည်းအဝေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အစည်းအဝေးမှာ အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အချက်အလက်ရှာဖွေ ဖေါ်ထုတ်ဖို့ အဖွဲ့တခု“Facts finding group” ဖွဲ့ပြီး ဆက်လက်ဆောင်ရွက် သွားမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ကြ ကြောင်း တဆင့်ကြား သိရပါတယ်။ ပဏာမ စုံစမ်း စစ်ဆေးရေး (PE) သဘောမျိုး ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဒီပို့စ်ကတော့ ကွန်မင့်န် အများဆုံးတက်လာအောင် စိတ်ဝင်စားခံရတဲ့ ပို့စ်တခုဖြစ်လာတယ်ထင်ပါတယ်။ လက်ရှိ အမှန်တကယ် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အနေအထားကို ခြုံငုံသုံးသပ် ထားရာကျတဲ့ `Kyaw' ရဲ့ ကွန်မင့်န်လေးကို သဘောကျပါတယ်။
“ မျှမျှတတ တွေးခေါ်ဆင်ခြင်တတ်မှု၊ ဗဟုသုတ နည်းပါးမှု၊ မှန်ကန်စွာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု တွေ မပြည့်စုံသေးတဲ့ ဒီလောကကြီးရဲ့ နေရာတစ်ခုမှာ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာ အကြောင်းတွေဖြစ်ပေါ်နေတာ မဆန်းကြယ်ဘူးလို့ ယူဆထားနိုင်မယ်ဆိုရင် ဖြေသာနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်”
ဒါပေမဲ့လည်း ဖြေသာနေရုံနဲ့ မပြီးနိုင်သမို့ နေသာအောင် ကြိုးစားချင်သူများရဲ့အားတက်သရော ကွန်မင့်န်တွေကို အသိအမှတ်ပြု လေးစားရပါတယ်။
I am so sorry to hear about that. I don't want to say anything about the fault. I would like to say to find out the solution for not happen similar tragedy. The loss ofaperson givealot of suffering to remaining, but I wish this loss can savealot of similar persons. May I bless you all find out the solution for it and future.
ဂျာနယ်တွေမှာပါလို့သာ ဒီကိစ္စ အပြင်ကိုထွက်လာတာပါ.
ဒီ post က သတင်းကိုဖွင့်ချတဲ့ ဂျာနယ်လစ်တွေကိုအပြစ်တင်ထားတာတော့မဖြစ်သင့်ပါဘူး
ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ ဆောင်းပါးရှင်ဟာ ဂျာနယ်မှာ ဆောင်းပါးပါလာတာကို ဝေဖန်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆောင်းပါးရေးတဲ့သူက နည်းမှန်လမ်းမှန် မရေးလို့သာ ဝေဖန်ထားတာပါ။
“ ဤဆောင်းပါး နှစ်ပုဒ်၏ ကောက်ချက်များနှင့် Prejudice ( ဥပဒေ ရှေ့က တင်ကြိုအဆုံးအဖြတ်ပေးခြင်း ) တို့ကို လုံးဝ သဘောမတူ စေကာမူ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်သည်ကိုတော့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါသည်။ တိုင်းပြည်၏ ကျန်းမာရေး အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေဖို့ ဆေးဝန်ထမ်းများသာမက ပြည်သူပြည်သားအားလုံးနှင့် သတင်းမီဒီယာများတွင်ပါ တာဝန်ရှိသည် မဟုတ်ပါလား။”
>Lu Yan : ရော်- ခက်ပါသော်ကော။ ကိုယ်တို့ ဗမာချင်းချင်း ဗမာလိုရေးထားပါရက်နဲ့ အကောက်လွဲ ရန်ကောဗျာ။
ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက် တိုက်တွန်းနှိုးဆော်သည်ကိုတော့ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါသည်။ တိုင်းပြည်၏ ကျန်းမာရေး အဆင့်အတန်း မြင့်မားလာစေဖို့ ဆေးဝန်ထမ်းများသာမက ပြည်သူပြည်သားအားလုံးနှင့် သတင်းမီဒီယာများတွင်ပါ တာဝန်ရှိသည် မဟုတ်ပါလား။” ကိုနေဦးဆွေးနွေးချက်ကို လက်ခံပါတယ်။ တခုစဉ်းစားမိပါတယ်။ ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး အမှန်တကယ် ဘက်မလိုက်(ထုံးစံပယ်ပြီ) စုံးစမ်းစစ်ဆေးရေး အဖွဲ့တခု ထာဝရရှိသင့်တယ်လို့ယူဆပါတယ်။ ကံကုန်လို့သေတယ်ဆိုပြီ ရိုးမယ်ဖွဲ့လို့မရပါ။ လက်သစ်ဇီဝက တွေကြောင့်လဲ သေနိုင်တာကြောင့်မို့ပါ။ အခုကိစ္စက ကျနော်အထင် ပြောရရင် ဗျောင်ပြန်ကြီး။ အမှန်တကယ် ဘက်မလိုက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ပါတ်သတ်တဲ့ အဖွဲ့သာရှိရင် ကာယကံရှင်က တိုင်ကြားလိုက်ရုံပါ။ ပြီးမှ မီဒီယာက နောက်မှ ဖေါ်ပြရုံမျှသာပါ။ ကျနော်အကြံပြုချက်ကတော့ ကျုပ်တို့နိုင်ငံမှာ ဆေးပညာရှင်များနဲ့ စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ အများယုံကြည်လေးစားတဲ့ ပညာရှင်အဖွဲ့ တခုလိုအပ်ကြောင်း ဆွေးနွေးပါတယ်။
မသိ၊မရှိအဖြေကိုရကြမှာပါ။refer Mo လဲ history သေချာမေးဖို့လိုပါတယ်၊Patientကို surgical case or medical caseခြွဲခားဖို.အဓီကလိုပါတယ်။အသကြိ်ကီးငယ်မရွှေး
The Nemius said...
ကျောင်းမှာတုန်းကတော့ ကျောင်းသားကိုသေအောင်ဆဲပြီး အပြင်မှာ respiration ကို full inspiration & expiration တောင်ဆုံးအောင်နားမထောင်တဲ့ ဆရာဝန်တွေအများကြီးရှိတယ်
ဘယ်သူကမှ နတ်မျက်စိ နတ်နားရမထားပါဘူး။
အစိုးရလခ နှစ်ပဲခြောက်ပြား နဲ့တော့ ဘယ်သူကမှ မလောက်ပါဘူး
ဒါပေမယ့် လူနာပေါ်နည်းနည်းတော့ အချိန်ပိုပေးသင့်တယ် ထင်တာပဲ
၂မိနစ်တောင်မပြည့်တဲ့လူနာကြည့်ချိန်ကလေးကို ၅မိနစ်လောက်ကလေးတော့ တိုးပေးသင့်ပါတယ်
ကျွန်တော်အဖေ Thailand မှာ ဆေးကုတုန်းက အဲဒီက ဆရာဝန်က သေသေချာချာ စမ်းပါတယ်။
ဒီကဆရာဝန်တွေ missed ဖြစ်သွားတဲ့ ectopic beat တစ်ခုကို တွေ့ခဲ့ရတယ်။
တစ်နေကုန်လူနာကြည့်တဲ့အချိန်ကလေးကနေ နည်းနည်းဖဲ့ပြီး စာပြန်ဖတ်ရင် ကောင်းမှာပဲ.....
ဆရာဝန်တွေ လောဘ လျှော့သင့်ပါတယ်
တစ်နေကုန် ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ရမလဲတွေးပြီး ဆ.မ မရှိဘဲ ဆေးခန်းဖွင့်နေတဲ့ H.Surgeon သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ရင်မောမိတယ်.....
လူနာတွေဖက်ကလည်း ဆေးခန်းတက်ရလို့ ပိုက်ဆံကုန်ရင် တစ်မျိုး
ပိုက်ဆံမကုန်အောင် ရှိတဲ့ facilities နဲ့ လုပ်ပေးလို့ ဒီလိုဖြစ်လာရင် လည်း ..........
appendicitis သေချာချင်ရင် CT,MRI ရိုက်ပါလား intraluminal ultrasound တောင် ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာပဲမြင်ဖူးတဲ့နိုင်ငံမှာနေနေတာ
သူတို့ပိုက်ဆံကုန်ပြီး အကျိုးမရှိဖြစ်ရတယ်ဆိုပြီး ဒီလိုလုပ်ဖို့တော့ မကောင်းပါဘူး
ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေကလည်း ဆရာဝန်ကြီးမျက်နှာတစ်ခုတည်း မကြည့်ဘဲ အားလုံးအတွက်မျှမျှတတ စဉ်းစားသင့်တာပေါ့
ဆေးဖိုးပိုပေါင်းတာ၊ ဆေးဖိုးဈေးက ၂ဆမကကြီးတာတွေကလည်း
လူနာကို Operationနဲ့ ပါတ်သက်ပြီး သေသေချာချာရှင်းမပြတာတွေကလည်း.........
Media တွေဖက်ကလည်းဖြစ်တာနည်းနည်း ဖွတာများများဖြစ်နေတယ်
သေသွားတဲ့လူနာဘက်ကတော့ ကြီးမားပြီးမရနိုင်တော့တဲ့ ဆုံးရုံးမူအတွက်ပူဆွေးသောကရောက်ခါ ပြောပြချက်ကို စာနယ်စင်းသမားတွေက အမိအရ အချက်ကြတုံးဖေါ်ပြလိုက်တာ အားလုံးသိရပေမဲ့ ၊ တဖက်ကဆရာဝန်လောကသားတွေကလဲ ဆရာဝန်တွေကို ပုတ်ခတ်လာတာကို ခြေပလာတာကတေါ့လှပါတယ် ။ တရားဥပဒေဆိုတာကလဲ ကိုယ့်ရှေ့မှာပေါ်တင်သတ်သွားတာကို တောင်မှရှေ့နေငှားပြီး ပြန်လည်ခြေပခွင့်ရနေတယ်ဆိုတာကတော့ ရှေးပဝေနသီထဲကရိုးနေပါပြီ ၊ အဲဒါကိုတော့လက် မခံချင်ပေမဲ့ လူတိုင်းလုပ်နေကြတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေပြီလေ ။ တရားဥပဒေဆိုတာ မတရားတာကို တရားအောင်လုပ်နေကြသူတွေဆိုတာ တရားရုံးမှာရင်နှင့်အောင်ခံစားဘူးသူတွေူသိကြပါတယ် ။ တရားဥပဒေဆိုတာလဲလူတွေ မတရားတာလုပ်လို့ပေါ်လာတာဆိုတော့ ကောင်းပါတယ် ။
အော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် သေပြီးသွားတဲ့လူတွေကော၊ မသေသေးဘဲဒုက္ခရောက်နေရသူတွေကော၊ အားလုံး အားလုံး ကျမ်းမာစွာ တရားမျတစွာ ရပ်တည်နေနိုင်ကြပါစေ ............။
"Facts finding group " မှတရားမျှမျှတတ
ဆရာ လှမွန် ရေးသွားတာ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ဓမ္မဓိဌာန် လည်းကျတယ်။ အောက်က ကွန်မန့်တွေကို ဖတ်ရတာတော့ အမုန်းတရားကို တွေ့နေရသလိုပဲ။ ငြိမ်နေရတာ ကြာပြီ။ ဘယ်သူ့တုန်းကလဲ ဘယ်လို ဖြစ်တာ။ အခု အခွင့်သာပြီ။ ဆွမ်းကြီး ဝိုင်းလောင်းကြစို့ ဆိုတဲ့ ကွန်မန့်တွေလဲ ဖတ်ရပါတယ်။ မူရင်းပို့စ်က ဘယ်သူမှားတယ် ဘယ်သူမှန်တယ် ဆိုတာ ဆွေးနွေးနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သတင်းမီဒီယာတွေ အနေနဲ့ ကာယကံရှင်တွေ ထိခိုက်မှု မရှိအောင် ဘယ်လို ရေးသားကြမလဲ ဆိုတာကို သုံးသပ်ထားတာ လို့ ကျနော် ထင်တယ်။ ဒီတစ်ယောက်ကို မှားမှားမှန်မှန် စံပြ အပြစ်ပေးလိုက်၊ ကျန်တဲ့ ဆရာဝန်တွေ အကုန် ကြောက်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲလာလိမ့်မယ် ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေတော့ မရှိသင့်ဘူးလို့ ကျနော် ထင်တယ်။ အဲလို တွေးခေါ်နေလည်း လက်တွေ့မှာ ပြောင်းလဲ မလာပါဘူး။ တရားဥပဒေရဲ့သဘောက တကယ် အပြစ်မရှိတဲ့သူ တစ်ယောက် အပြစ်မကျစေရေး လည်း ပါတာပဲ။ စံနှုန်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြောရာမှာ ဒီနိုင်ငံမှာ ရနိုင်တဲ့ အရင်းအမြစ်တွေနဲ့ တိုင်းတာပြီး ပြောသင့်တယ်။ လူတိုင်းဟာ ကိုယ့် professional ကိုယ် ရှိတာမို့ professional အချင်းချင်း နားလည်မှု ရှိစွာနဲ့ ဆက်ဆံနားလည်မှု ပေးနိုင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
It is very good to be able to know different perspectives of different people. Thanks for raising this, saya.
Media hasagreat influencial role over and so should be very careful on what they give to their audience. Evenasmall words can change the life ofaperson. သေဆုံးသွားတဲ့သမီးလေးနဲ့ ကျန်ရစ်သူမိသားစုကို ကိုယ်ချင်းစာနားလည် ခံစားပေးမိပါတယ်။ သမီးလေးသေဆုံးသွားမှုဟာ အချည်းနှီးအလဟသ မဖြစ်ပါဘူး။ အခုအချိန်မှာ ဘယ်သူမှန်တယ်၊ ဘယ်သူမှားတယ်၊ ဘယ်သူ့အပြစ်လို့ အတိအကျမပြောနိုင်သေးပေမယ့် အနည်းဆုံးတော့ အခြားသူတွေအတွက် ကောင်းတဲ့အပြောင်းအလဲလေးတွေဖြစ်လာမယ့်အနေအထားကို မျှော်မှန်းမိပါတယ်။ အမှန်တရားက လွှမ်းမိုးနိုင်ပါစေ။
သတင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့သတင်းရဲ့နောက်ကွယ်မှာ အမှားယွင်းတစ်ခု့အတွက်ပေးဆပ်လိုက်ရတဲ့ အသက်တွေဘယ်လောက်ရှိပြီလဲဆိုတာ ကိုသတိထားမိပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော မီဒီယာတွေရဲ့ မီးမောင်းထိုးပြမူကိုအရှိန်အဟုန်နဲ့ပြောင်းလည်းနေတဲ့ခေတ်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့အတူ အသာတကြည်ပဲ လက်ခံရပါမယ်။ တဘက်သတ်ကြတယ်ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ အကယ်လို့ journalist က သွားview ရင်ကော ဆေးရုံက တာဝန်ရှိသူတွေက အသာတကြည် လက်ခံဖိတ်ခေါ်မှာ လား? ဒါမှမဟုတ် သူတိုရဲ့ခေါက်ရိုးကျိုးနေတဲ့ ဗျူရိုကရက်အောက်မှာ ပြန်ကြားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အဖွဲ့ မရှိလို့လား။ ဒါမှမဟုတ် အမှောင်ချတာလား။ဒါမှမဟုတ် ...........အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကို လူမှုရေးရှုထောင့်ကရေးရတော့ဘူးလား? ပိတ်ဆို့လျှစ်လျှူရှုပြီးကျောက်ခေတ်ကို ခေါ်မှာလား။ဒါမှမဟုတ် journalist တွေက စည်းဘောင်းကျော်တာလား။ ကျတော်ကတော့ယဉ်ကျေးတဲ့ 21ရာစုနဲ့ အတူ စီးမျောချင်တယ်။
I recommend all the comments which are on the SIDES OF PATIENTS AND JOURNALS.
to ak > plz dont say 'emotion is not important' are you one of the human being? hope u can feel the meaning of life.
ဟို ခပ်ေုကာင်ေုကာင်လူ ၀င်ပြီး ဘာမသိညာမသိ ဆရာုကီးလုပ်လည်း ခွင့်လွတ်ထားပါတယ်။ လက်သည်းဆိတ်လို့ လက်ထိပ်နာသွားလား မသိ။ ထားပါတော့.
လောလောဆယ် ဂျာနယ်တွေမှန်တယ်မှားတယ်ဆိုတာ အသာထားလိုက်ပါအုံး။
ဆရာဝန်ုကီးတွေနဲ့ ပုဂ္ဂလိကပိုင်ဆေးရုံကီးတွေကို ကိုယ့်ငွေနဲ့ကိုယ်အောက်ကျခံ ပြီးဆက်ဆံနေရတဲ့ လူအများစုဟာ ဒီလိုသတင်းမျိုး ဂျာနယ်တွေထဲမှ ပါလာ တော့ ခံစားချက်ထပ်တူကျပြီး စိတ်ဝင်စားလာုကတာပါ။ ဒါကို ပေးထားတဲ့ commentအများစုက သက်သေပြနေပါတယ်။ မကျေမနပ်ထုတ်ဖေါ်ပြောလာကြတာတွေက သာဓကတွေပေါ့။အမှန်တရားဟာဘယ်ဘက်ကလည်း ဆိုတောပေါ်လွင်နေပါတယ်။ ခုဆိုရင်စုံစမ်းရေးတွေဘာတွေတောင်လုပ်နေပြီဆိုတော့ ထိရောက်တယ်ပြောရမှာပေါ့။အရင်ကမကြားဘူးတဲ့ တိုးတက်မှုတွေပေါ့ဗျာ။
( ဒါဆိုဒီမှာမကုနဲ့ နိုင်ငံခြားသွားကုလို့တော့ မငေါ့လိုက်နဲ့ဦး။ ကျနော်တို့အများစု ဟာ ရွေးချယ်စရာနည်းလှပါတယ်)
ဒါဆိုရင် ဒီလိုသတင်းမျိုး ဟာ အများစုအတွက် အကျိုးပြုတယ်ဆိုတာကို မျက်စိတ်မှိတ်ပြီး ငြင်းဆန်နေလို့မရပါဘူး။ုကိုဆိုနေရမယ့်သတင်းတွေပါ။
မပြည့်စုံသေးတဲ့ ။အသက်မ၀င်တဲ့ဥပဒေတွေနဲ့ ကိုင်ပေါက်ရမယ့်အချိန်မဟုတ်သေးဘူးလို့ လည်း ယူဆမိပါတယ်။
(ဒီက ဥပဒေအေုကာင်း ဆွေးနွေးချင်စိတ်မရှိလို့ မဆွေးနွေးတာပါဆရာသမားတို့ရေ။ဆေးပညာကတော့ ဗိစပ်၇ွက်အကြောင်းလောက်တော့နားလည်ပါတယ်ခင်ဗျား)
ပိုမိုတိုးတက်သော ကျန်းမာရေးစနစ် အမြန်ပေါ်ပေါက်လာပါစေဟု အိပ်မက်မက်ရင်း။။
ဆရာပြောတဲ့ အကြောင်းအရာကို ထောက်ခံပါတယ်။ Accused လောက်ပဲ သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်အကြောင်းကိုတော့ အတိအကျ သေချာမသိပေမယ့်..အဲဒီဆေးရုံကတော့..၀န်ဆောင်မှုတအားညံ့ပါတယ်။
ကိုယ်တွေ့မို့ပါ။ ညီမရဲ့ အဘွားလည်း အဲဒီမှာပဲ ဆုံးခဲ့ရတာပါ။ Personal case ကိုပြောတာမဟုတ်ပါ။ အဘွားဆိုတော့ အသက်ကလည်း ကြီးပြီးဖြစ်လို့ စိတ်ကိုဖြေခဲ့ပေမယ့်..၀န်ဆောင်မှုကတော့ တော်တော်ကို ဆိုးဝါးပါတယ်။ တာဝန်ကျ MO တွေနဲ့ တစ်ချို့သော ၀န်ထမ်းတွေက ၀တ်ကျေတန်းကျေ အစိုးရဆေးရုံ ဆေးခန်းနှင့် မခြားတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုလောက်ပဲရပါတယ်။ မလိုအပ်တဲ့ ဆေးတွေဝယ်ခိုင်းပြီး..ပြန်သွင်းလို့လည်းမရနဲ့ တော်တော်လေးကို ပိုက်ဆံကုန်ခဲ့ရပါတယ်။ Emergency အနေနဲ့ရောက်လာတဲ့လူနာကို. ခုတင်တွေ အများကြီးရှိရက်နဲ့ ဟိုမှာ ထားမလိုလို ဒီမှာထားမလိုလိုနဲ့ အချိန်ဆွဲခဲ့ပါတယ်။ ဆေးရုံရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကိုတော့ လုံးဝကျေနပ်စရာမရှိပါ။
ကွန်မန်းတွေပေးထားတာတော့စုံနေပါပြီ... ပို့စ်တင်တဲ့လူလဲ ပြန်ရှင်းပြရ..မကျေမနပ် ပြန်ဆော်လိုက်ရနဲ့ပင်ပန်းလှပြီပေါ့..ဟုတ်လား..လူတစ်ယောက်ကိုပို့စ် ကိုသေချာမဖတ်ပဲ ဝေဖန်ရကောင်းလားဆိုပြီး ဆော်ထားတာတွေ့တယ်..ကျွန်တော့ 11 ဂျာနယ်ဖတ်တော့ သက်ဆိုင်ရာဆေးရုံက တာဝန်ရှိသူတွေက ဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဆိုပြီး ငြင်းလွှတ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်..ဒါကိုဆရာက သေချာများမဖတ်မိလို့ မီဒီယာကို တစ်ဖတ်သတ်ရေးထားသယောင်ယောင် ဖော်ပြထားတာလားခင်ဗျာ..။ နောက်တစ်ခါ ကွန်မန်းပေးသူတွေထဲက ဝင်းပေါ်မောင် ဆိုတာ Hope Center လို ပရဟိတနဲ့ ပညာဒါနလုပ်တဲ့ ကျောင်းတွေ နောက် ကိုယ်ထူကိုယ်ထ NGO ပုံစံ လူငယ်တွေစုလုပ် တဲ့နေရာတွေမှာ လူတတ်ကြီးလိုလုပ်ပြီး ပိုက်ဆံတွေလိမ်လိမ်သွားတဲ့ ဝင်းဖေမောင် ကြီးများဖြစ်နေမလားမသိဘူးနော်..။
မီဒီယာသမားတော့မဟုတ်ဘူး ဒါပေမဲ့ မီဒီယာကို စိတ်ဝင်စားပြီးအားပေးတဲ့တစ်ယောက်ပါ..။ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ်ယက်ပြီး ပြောလာမယ်ဆိုရင်တော့...
I am not sure this post will be able to view in Myanmar but just in case please also comment about it! thanks :)
(The writer isamember of the ....... andaleading member of an HIV/AIDS awareness program)
sorry to hear that story. the first patient should sue the hospital for charging 20000 kyats per bottle for testing HIV
to Empathy/ ကျွန်တော်၏ ဒုတိယမြောက် comment တွင် စာရေးလောကြီးသွားမှုအတွက် တောင်းပန်ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ထပ်မံလည်း
ရှင်းလင်းထားပါသည်။ အကို ကျော်ဖတ်သွားမိသဖြင့် ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။ သေဆုံးသွားသူအတွက် စာနာဝမ်းနည်းမှုသည် (ကျွန်တော်အပါအ၀င်)
လူတိုင်းလူတိုင်းတွင် ရှိပြီးဖြစ်နေသည်ဟူသော ခံယူခြင်း၊ ဆောင်းပါးရှင်ပြောလိုသည်မှာ ထိုကိစ်စ(ဆရာဝန်မှားမမှား)မဟုတ်ခြင်း၊ ရှေ့လူများ၏
commentများတွင် ပါဝင်ပြီးဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ကျွန်တော်၏ commentများတွင် မရေးသားမိတော့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
to Moestar/ personal attack များစိတ်မပါတော့ပါ။ ရေးသားလိုသည်များ ရှင်းလင်းသွားပြီဟု ယူဆပါသည် (ဆက်လက်ကာ
တင်ကြိုအပြစ်ပေးပုံဆန်သော အရေးအသားကို ထောက်ခံသေးပါလျှင်လည်း အကို့ကို မကန့်ကွက်တော့ပါ။ ဂျာနယ်များကိုတော့ ဆက်လက်
ကန့်ကွက်ပါသည်) ယခု အကိုစွပ်စွဲထားသော ခပ်ကြောင်ကြောင်လူမျိုး (ဆွေးနွေးထိုက်သူ) ဟုတ်မဟုတ် အပြင်လက်ဖက်ရည်ဆိုင်မှာ
(လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်) ဆွေးနွေးနိုင်ပါသည်။(ရေးရသည်မှာ လက်ညောင်းလှပါသည်။ ဘေးလူများလည်း နားညီးပါပြီ။) ကျွန်တော်လက်ဖက်ရည် တိုက်ပါမည်ခင်ဗျား။ မှားသွားခဲ့သည့် သူက တောင်းပန်ကြေးပေါ့။ (စိတ်ကုန်သည်ဆိုသော အရေးအသားတစ်ခု အတွက်တော့ ကျွန်တော့ဘက်မှ တောင်းပန်စရာ ရှိသည်ဟု ခံယူပါသည်) လက်ထိပ်နာရန်မှာ ယခုထက်ထိ ရေးသားသူ၏
နာမည်ကို မသိပါခင်ဗျား မှတ်မထားမိပါ (စော်ကားခြင်း မဟုတ်ပါ) facebook ဖိုရမ်မှတဆင့် ဆရာဝန် တစ်ဦးပင် ဖြစ်ကြောင်း ယနေ့မနက်မှ သိပါသည်ခင်ဗျား။ လက်ဖက်ရည်သောက်ချင်(ရဲ)မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ လူနာတွေကို အခုထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့ ၀န်ဆောင်မှုတွေ ပေးနိုင်ပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မပေးကြပါဘူး။ အဲဒါက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူတွေရဲ့ အားနည်းချက်ပါ။ အဲဒါကို ဘယ်သူမှလည်း မပြင်ကြဘူး။ ဂျာနယ်တွေက ဆော်တော့လည်း တကယ်တမ်း တာဝန်ရှိသူတွေက တစ်လုံးတစ်လေမှ ၀င်မပြောကြဘူး။ လွှတ်ပေးထားကြတယ်။ သူတို့တစ်တွေသာ ၀င်ရောက်ဖြေရှင်းရင် အခုလို မလိုအပ်ဘဲ comment ၆၆ ခု ဖြစ်လာစရာ အကြောင်းမရှိဘူး။ အမြင်မတော်သူတွေက ၀င်ရောက်ကာကွယ်ပေးနေရတာ ကြည့်လို့မကောင်းပါဘူး။ ပြည်သူတွေကတော့ ဆရာဝန်တွေလောက် ဥာဏ်မမြင့်ကြတော့ သူတို့တတ်သလောက်တော့ ဝေဖန်ကြမှာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဘက်က အားနည်းချက်တွေရှိနေတော့လည်း ဘယ်တတ်နိုင်ပါ့မလဲ။ ခံရမှာပေါ့။ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ကို ကောင်းစေချင်လို့ပြောနေကြတာ လို့ပဲ မြင်ပါတယ်။
ကိုဘလော့ ၈ါ ပြောတဲ့ဂျာနယ်ကိုဖတ်ကြည့်တော့ဆေးရုံကိုဖုန်းဆက်မေးတော့ ဘာမှပြန်မပြောဘူးလို့ဆိုပါလားဗျ..ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားလဲ ဆရာဝန်ဆိုတော့ ဆရာဝန်ဘက်က နာတာဖြစ်မှာပါ.ကျောင်းတုံးကဒိဆရာနဲ့သင်ဘူးခဲ့ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ယုံကြည်လို့လဲ နေမှာပေါ့..တခါ တလေ မှားတတ်ပါတယ် ဒါပေမယ့် အထူးကု ဆရာဝန်ဘွဲ့ ခံထားပြီးတော့ခွဲခန်းထဲကထွက်လာတဲ့လူနာ အခြေအနေမကောင်းတာကိုဘာလို့ တခါ တည်း ကြည့် ပြီး မျက်ကွယ်ပြုသွားရတာလဲ..ဂျာနယ် က သာ ဖော် ထုတ်မရေးဘူးဆိုရင် ဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူး..ဂျာနယ် သတငိးသမား အရေးမတတ်ဘူးဆိုသည့်တိုင်အောင် ..မြန်မာပြည်မှာ သတင်းစာသင်တန်းကျောင်းဆိုတာ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ရျိတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာလူတိုင်းသိပါတယ် .ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်ကြီး တို့ ၇ဲ့ ဆေးကျောင်းတော်ကြီးကတော့ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းမြောက်များစွာတည်းကရှိနေခဲ့တာနော့် အထူးကုဆိုသူတွေ ဟာလဲ FRCS .MRCS ဆိုတာတွေ ချည်းဘဲနော့် ဒိတော့ သတင်းသမားအရေးမတတ်တာ မဆန်းပါဘူး...သူ့မှာ ဆရာဝန်ကြီးတို့လို သင်တန်းကျောင်းမှမရှိ ဘဲ.ဒါတောင် သူ့ တာဝန်ကျေလို့ သိကြရတာ..
အပေါ်က ကော်မန့် တစ်ခုမှာဖတ်လိုက်ရတာက အဲဒိဆရာဝန်ကြီး က တရုတ်ပြည်သွားနေတယ်ပြောတယ် .အခုေ၇ာ ပြန်လာပြိလား ပြန်မလာဘဲတခါတည်းထွက်ပြေးသွားပြီလား.....တရုတ်ပြည်သွားဘို့အလုပ်ရှုပ်နေတာနဲ့လူနာကိုမကြည့်အားခဲ့တာလား...လို့မြန်မာပြည်ကနေရာအတော်များများကအများနဲ့ဆက်ဆံ၇တဲ့နေရာက ၀န်ထမ်းတော်တေ်ာများများဟာ ဆက်ဆံရေးညံ့ ဖျင်းတာ လူတိုင်းသိကြပါတယ်အဲဒိထဲကမှ ပုဂ္ဂလိ ကဆေးရုံနဲ့ အစိုးရဆေးရုံဆေးခန်းက ၀န်ထမ်းကွေဟာအစိုးဆုံးပါဘဲ ..ဒိအခြေနေကနေ ပိုကောင်းတဲ့ပြောင်းလဲမှုတော့လုပ်ကြရမယ်.လုပ်ကြပါလို့လဲပြောလို့ပါတယ်...
ကျွန်တော့ အထင်တော့... အားလုံးပဲ.. ဒီအဖြစ်အမှန်ကို.. သေချာ စောင့်ကြည့်..ပြီးမှ ဝေဖန်နိုင်ကျရင်အကောင်းဆုံးပါ... ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီသီတင်း ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ ဂျာနယ် ဟာဆိုရင်လဲ ကျွန်တော် နဲ့ လွန်စွာခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့သလို လွန်ခဲ့သောအချိန်ကာလ တခု တုန်းက အစိုးရကိုယ်တိုင်က ထုတ်ဝေခွင့် ပိတ်ပင်ခဲ့သောဂျာနယ်တခု ဖြစ်ခဲ့သလို ဆေးခန်းဖြစ်တဲ့ SSC ဟာလဲ လွန်ခဲ့သောအချိန်က ဆေးကုသခ ကလွဲပြီးအားလုံးပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဆေးခန်းတခုဖြစ်ကြောင်းအားလုံးသိပြီးသားပါ. ဒီတော့.. ဘယ်ဟာကဘယ်လိုမှန်ပြီး ဘယ်ဟာကဘယ်လိုမှားလဲဆိုတာ.. ယနေ့ နောက်ထက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့ Information အတိအကျရနိုင်တဲ့ သီတင်း , ဂျာနယ် , သီတင်းစာ တွေမှာ အတိအလင်း ကာယကံရှင်များကကိုယ်တိုင် ပြောဆိုမှသာ.. ဆုံးဖြတ်ကျရင် ကောင်းကျမယ်လို့.....
To Primum non cere,
Regarding to your comment about HIV patients in Myanmar, may I ask some questions.
In your comment, the blood donor of the second patient had had unprotected sex with CSW before donating blood.Was he positive for HIV antibody test at the time he donated blood to that child ?
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ခွဲစိတ်ကုသခံရတော့မယ့်လူနာတွေ ကို "မေ့ဆေးကြောင့် ရှောင်တခင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အန္တရာယ်များကို ကြိုတင်သိရှိလျက် သင့်လျော်သော မေ့ဆေးထုံဆေးဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသခြင်းကိုသဘောတူပါ သည်။" လို့ လက်မှတ်ထိုးခိုင်းလေ့ရှိပါတယ်။
ဆေးပညာကျင့်ဝတ်မှာပါရှိတဲ့ Informed Consent ဆိုတာဟာ ဒီလိုလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်ရုံနဲ့ မလုံလောက်ပါဘူး။ ရောဂါရဲ့လက်ရှိအခြေအနေ၊ ရောဂါ အမည်တပ်ထားမှု၊ ဆင်ကွဲဖြစ်နိုင်ချေ၊ ခွဲစိတ်ရတဲ့အ ကြောင်းရင်းနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ ခွဲစိတ်မှုဖြစ်စဉ်အဆင့် ဆင့်၊ နာလန်ထလာနိုင်ချေ၊ နောက်ဆက်တွဲကုသပေး မှု၊ ပြောင်းလဲဆိုးရွားသွားနိုင်ချေ၊ ခွဲစိတ်မှုကြောင့်ဖြစ် ပေါ် လာနိုင်တဲ့ရလဒ်၊ ကုန်ကျစားရိတ်စတာတွေကို လူနာ နားလည် နိုင်တဲ့စကားရပ်နဲ့ကြိုတင်အသိပေး ရပါတယ်။ လူနာမေးမြန်းလာတာတွေကို ဆရာဝန်က ဖြေကြားပေး ရပါသေးတယ်။ အားလုံးကို လူနာက သ ဘောပေါက်ပြီးသွားရင် လူနာဆုံးဖြတ်တာကို ဆရာဝန်က လိုက်နာရပါ တယ်။ လူနာက သဘောတူရင် လက်မှတ်ထိုးပေးပြီး သဘောမတူငြင်းဆန်တာကို လည်း ဆရာဝန်ကအသိ အမှတ်ပြုပေးရပါတယ်။ လူနာက ဆရာကောင်းတယ် ထင်သာလုပ်ပါလို့ ပြော လာရင်တောင် ဆရာဝန်က အလျင်စလို မပြုမူရပါဘူး။ ရွေးချယ်စရာကုထုံးတွေကို ထပ်မံရှင်းပြပေးပြီး လူနာ ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်လာအောင် ကူညီအားပေးရပါတယ်။ နောက်ဆုံး ဆရာဝန်ကို ၀ကွက်အပ်လာရင်တော့ လူနာ အကာင်းဆုံးအကျိုးရှိစေဖို့(the best interest of the patient) မျှော်ကိုးပြီး ကုသပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Informed Consent ဆိုတဲ့ ဆေးပညာ ကျင့်ဝတ်ကို လုံးစေ့ပတ်စေ့လိုက်နာဖို့ အားနည်းနေပါ သေးတယ်။ ဆရာဝန်ကိုသာ အဖအရာ (Paternalism)ထားပြီးဆုံးဖြတ်ခိုင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။
great post တစ်ခုပါ
Thank you for visiting said...
It's terrible. If the case happened in other developed countries, it is the end for this surgeon. Now it seems that the special clinic is trying to defend itself and its medical staff. Shame on its medical staff & clinic itself. Not even shown professionalism.
" In Myanmar, this is not the first case. Many unnecessary deaths of patients due to negligence really happened. All these medical staff got away with.
If the case happened in other developed countries, it is the end for this surgeon. (thank you for visiting ) http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1121980/
အပေါ်က link လေးကိုသွားကြည့်တော့ စိတ်ဝင်စားစရာ လေးတွေ့လို့ ဝေငှလိုက်တာပါ။ ဥပဒေ သဘောသဘာဝ ကိုသေချာ ဃ ဏ နားလည်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ ယူကေမှာ၊ ယူအက်စ်မှာ၊ အနောက်နိုင်ငံမှာ ဆိုရင် ဒီဆရာဝန် ဘာဖြစ်သွားမယ်၊ ညာဖြစ်သွားမယ်လို့ အထင်နဲ့ မှန်းဆမျှော်မှန်းပြောနေကြသူတွေ သိနိုင်အောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်စေချင်တာ၊ ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ လုံးဝမရည်ရွယ်၊မမျှော်မှန်းပါ။ ဒါပေမဲ့ မှန်းဆချက်နဲ့ ထင်မြင်ရေးသားမှုတွေကို ရှင်းရှင်း
A UK consultant surgeon accused of the manslaughter ofateenager who died on the operating table was found not guilty just before Christmas after only 50 minutes' deliberation by the jury.
Kenneth Woodburn,aconsultant vascular surgeon with the Royal Cornwall Hospitals NHS Trust, was accused of having caused the death of Kelly Dent through gross negligence after her heart was punctured during an operation to insertaHickman catheter.
The jury at Exeter crown Court reached their verdict after the judge, Mr Justice Toulson, told them in his summing up: “To treat as criminal negligence conduct of which the average doctor would say ‘there but for the grace of God go I’ would carry the extent of the criminal law too far and put further pressure on doctors working in sometimes difficult conditions.”
ဂျာနယ် တွေ မှာ ဒီလိုဖေါ်ပြလာတာ ကိုတော့ ထောက်ခံပါတယ်။
ဆရာဝန်ကြီးမှာ လူနာ တွေကို ၃ မိနစ် ၅ မိနစ် ပိုကြည့် နိုင် ကြပါစေ
မြန်မာပြည်မှာ ငွေမရှိရင် သေမှာပဲ
အထူးကုဆေးခန်းမှာ မပြနိုင်ရင် သေမှာပဲ
အထူးကုဆေးခန်းမှာထားပြီး စပ္ပါယ်ရှယ်အခန်းမှာ မထားနိုင်ရင် သေမှာပဲ
စပ္ပါယ်ရှယ်အခန်းမှာထားပြီး စပ္ပါယ်ရှယ်နပ်စ်မငှားနိုင်ရင် သေမှာပဲ
စပ္ပါယ်ရှယ်နပ်စ်ငှားပြီး နိုင်ငံခြားပြန် စပ္ပါယ်ရှယ်ဆရာဝန်မငှားနိုင်ရင် သေမှာပဲလို့
စေတနာမရှိတဲ့ ဆရာဝန်ကို မှားပြီး ငှားမိရင်လည်း သေမှာပဲ.. အလို ဘုရားသခင်
၂ ခါခွဲတော့ ဘယ်သူခံနိုင်မလဲ? သေပေါ့...
ဆရာ လူနာအမောဖောက်နေပြီ လာပါအုန်းဆို
ဆရာက ဆရာဝန် ဆေးကုတတ်လို့ အားကိုးတာပါဆရာရယ်.. ခုတော့ ကျွန်မအဖေ သေပြီပေါ့
ဒါကြောင့် လူတိုင်း ဒီလိုခံစားဖူးမှာ မဟုတ်ဘူး။
တော်တော်လည်း ပွဲဆူသွားပြီ။ အချိန်တန်ရင် အမှန်တရားဆိုတာ တွေ့လာမှာပါ။ အမှန်တရားဆိုတာ နိုင်ငံနယ်နိမိတ်နဲ့ သက်ဆိုင်တာမှ မဟုတ်တာကိုး။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တွေးကြည့်လို့ရအောင် ကိုးကားချက်ကလေးတစ်ခုကို သက်ဆိုင်မယ်ထင်လို့ (food for thoughts) တစ်ခုအနေနဲ့ တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
ဆရာဝန်တစ်ယောက် က လူနာကို ကုသရာမှာ သင့်တင့်လျှော်ညီတဲ့ ဂရုစိုက်မှုနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိမှု ကြောင့် လူနာဟာ ထိခိုက်နစ်နာမှု ရှိလာမယ် ဆိုရင် အဆိုပါဆရာဝန် ရဲ့ကုသမှု ကို MEDICAL NEGLIGENCE လို့ သတ်မှတ်ပါတယ်။
MEDICAL NEGLIGENCE လို့ သတ်မှတ်ဖို့ အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက် (၄) ချက် နဲ့ ညီညွတ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၁) ဆရာဝန် သည် အဆိုပါ လူနာအား သင့်တင့်လျှော်ညီတဲ့ ဂရုစိုက်မှုနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှု
(reasonable skills and care) ဖြင့်ကုသရာတွင် တာဝန်ရှိသူ ဖြစ်ခြင်း
၂) ဖော်ပြပါ တာဝန်အား ဆရာဝန်မှ ပျက်ကွက်မှု ရှိခြင်း ( dereliction of duty)
၃) ထိုပျက်ကွက်မှု ကြောင့် ဖြစ်ပွားသော အကျိုးဆက် ဖြစ်ဖြင်း (direct causation)
၄) လူနာ သည် ထိခိုက် နစ်နာမှု ရှိခြင်း ( damage to the patient )
ကိုးကား ။ ။ မြန်မာနိုင်ငံဆေးတက္ကသိုလ်များ တွင် ပြဌာန်းထားသော (Lecture notes on Forensic Medicine) စာအုပ်မှ
အဆိုပါ စာအုပ်ပြုစုသူတွေဟာ လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီ မှာပါဝင်နေကြသူတွေ၊ ပါဝင်ခဲ့ဖူးကြသူတွေချည်းပါ။
ကိုယ်တိုင်ခံစားဖူးမှကိုယ်ချင်းစာတတ်ကြမှာပါ..ကိုယ်တွေ့မကြုံဖူးသူများကတော့ တရားမျှတဖို့လိုတယ်..အချက်အလက်တွေပြည့်စုံဖို့လိုတယ်လို့စောဒကတက်နိုင်ကြပေမဲ့ရင်နဲ့အမျှခံစားခဲ့ကြရသူတွေကတော့ ဒီစာတွေကိုဖတ်ပြီး မိမိကြုံခဲ့တာတွေကို ပြန်ပြောပြချင်စိတ်တွေတစ်ပုံကြီးပါ..
ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ မိမိတို့ရဲ့ ခံစားချက်တွေ မတရားခံရတာတွေကို ရင်ဖွင့်ချင်ကြတာ ကျွန်တော်ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လမ်းလွဲမှာကိုလည်း စိုးရိမ်မိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့တစ်တွေက ဒီ public health in myanmar ဆိုတဲ့ blog မှာ ၀င်ရောက်ရေးသားကြတယ်ဆိုတာ ပြည်သူတွေကို အသိပညာ ဗဟုသုတတွေ ဖြန့်ဖြူးပေးချင်လို့ပါ။ အဲဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ အားလပ်တဲ့အချိန်လေးတွေကို ဖဲ့ပြီး ၀ါသနာပါတဲ့ စာရေးသားတဲ့အလုပ်နဲ့ ၀င်ရောက်ပြီး ဆေးပညာဆောင်းပါးတွေ ဗဟုသုတဆောင်းပါးတွေကို ရေးသားနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ blog မှာ ပုံမှန်ရေးသားနေတဲ့ ဆရာ/ ဆရာမ အချို့ဟာ မြန်မာပြည်မှာ တောင်ရှိကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ နိုင်ငံရပ်ခြားက နေ တစ်ဘက်တစ်လမ်းကနေပြီး ကူညီပေးနေကြတာပါ။ အဲဒီတော့ ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ comment ပေးတဲ့အခါမှာ ဆောင်းပါးပါအကြောင်းအရာတွေကို ပဲ ဦးစားပေးပြီး ဆွေးနွေးစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ထဲက မကျေနပ်ချက်တွေကို ပြောချင်တယ်ဆိုရင် ကာယကံရှင်တွေကို တိုက်ရိုက်သွားရောက် ပြောဆိုခြင်းကသာ ထိရောက်ပါလိမ့်မယ်။ မလိုအပ်ဘဲ ငြင်းခုံကြတာတွေ မဖြစ်စေချင်လို့ပါ။
ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ ဆေးပညာ ဗဟုသုတနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိချင်တာတွေ မေးချင်တာတွေရှိရင် ကြိုက်သလောက်မေးနိုင်ကြပါတယ်။ ဒီ blog လေးဟာ ပြည်သူကို ဗဟုသုတ ဖြန့်ဖြူးပေးဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လုပ်ထားတာပါ။ ကျန်တဲ့ ပြဿနာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်အတွက် ကျွန်တော်တို့ မဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါဘူး။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဒီဘလောက်က စုပေါင်း ဘလောက်ဆိုပေမယ့် ပါဝင် ရေးသားကြသူတွေ အားလုံးဟာ အယူအဆတွေ အမြဲတမ်း တူနေမယ်လို့ ပြောလို့ မရပါ။
ကျွန်တော့် (တက္ကသိုလ် လှမွန်) အနေနဲ့ကတော့ အခုလို စာဖတ်သူများရော ဘလောက်ဂါများပါ တက်တက်ကြွကြွ ပါဝင် ဆွေးနွေးကြတာကို ကျေနပ်ပါတယ်။
ဒီကနေ တဆင့်တက်ပြီး ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အရည်အသွေး ပိုမိုကောင်းအောင် မိမိရောက်ရာ နေရာကနေ ဘာတွေများ လုပ်လို့ ရမလဲ ဆက်တွေးနိုင်ရင် လုပ်နိုင်ရင် ကောင်းပါမယ်။
ကျွန်တော့်ရေးသားချက်က ပျားအုံတုတ်နဲ့ ထိုးတယ်လို့ စာရှုသူအနေနဲ့ ယူဆချင်လည်း ယူဆနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မိမိအမြင်နဲ့ ယုံကြည်ချက်ကို လွတ်လပ်စွာ တင်ပြတာဖြစ်ပြီး ထွက်လည်းမပြေးပါ။ မှတ်ချက်အားလုံး (ထောက်ခံ၊ ကန့်ကွက်၊ ပုံမှန်) ကို တစ်ခုမကျန် တင်ထားပေးပါတယ်။
ပျားအုံဆိုတာ ဘယ်ဟာကို ပြောတာပါလဲခင်ဗျာ။ media လောကသားတွေကို ပျားအုံကြီးနဲ့ တင်စားပြီးပြောတာလား။ ဒါမှ မဟုတ် ဒီနေ့ဒီခောတ်မှာ ဆရာဝန်တွေ အကျင်ပျက်တာကြီးက ပျားအုံကြီးလို ထိုးဆွလို့ကောင်းလို့ပါသလား ခင်ဗျာ။ ဆရာတက္ကသိုလ် လှမွန်က ဖွချင်လို့ရေးတာ မဟုတ်သလို အပြစ်ပြောချင်လို့လဲမဟုတ်ပါဘူး။ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ discussion ပုံမျိုးလေး ဖြစ်ချင်လို့ရေးတာပါ။ ပြည်သူတွေ အတွက် ကောင်းစေချင်လို့ ပြောတဲ့ ဆွေးနွေးချက်တွေကို ကြိုဆိုပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး personal အမုန်းတွေ ခံပြင်းတာတွေကို မပြောပါနဲ့။ ဘယ်သူမှလည်း အကျိုးမရှိပါဘူး။
အပေါ်က ယုဝရီ က ဘလော့ဂါ ယုဝရီ အစစ် မဟုတ်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ သူများ အမည် အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး လာ မရေးသင့်ပါ။
ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်း blogရေးနေတယ်ဆိုကတည်းက မီဒီယာလောကသားထဲမျာ ပါပါတယ်။ မီဒီယာလောကကို ဖဲစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။
အခုအချိန်အခါဟာ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာ customer service training တွေ စပေးဖို့ အကောင်းဆုံးလို့ထင်ပါတယ်။ ဆေးရုံအုပ်ကနေ သန့်ရှင်းရေးအထိပေါ့။ အထူးကုတွေကို လက်ဖျားလေးနဲ့ မှ မထိရဲဘူးဆိုရင်လည်း ကျန်တဲ့သူတွေက customer service ကောင်းရင် လူနာက ကျေနပ်တာပေါ့။ မြန်မာလူမျိုးများ ဖောက်သည်များအတွက် customer service ကောင်းကောင်းပေးနိုင်ကြပါစေ။
ဘယ်အလုပ်လုပ်ပဲလုပ်လုပ် Professional ကျင့်ဝတ်ရှိပါတယ်
အမုန်းတရားတွေ Personal matter တွေဘေးဖယ်ထားကြရအောင်လားဗျာ
စာရှုသူများ၏ မှတ်ချက်အချို့ကို ပြန်ကြားရန် တာဝန်ရှိသည်ဟု ခံစားမိပါသည်။
ကျွန်တော့်အနေဖြင့် သတင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ဆရာဝန် မည်သူမည်ဝါ ဆိုသည်ကို ယခုအချိန်အထိ အတိအကျ မသိရှိပါ။ သိရှိအောင်လည်း မစုံစမ်းခဲ့ပါ။ ဆရာဝန် မည်သူဆိုသည်က အကြောင်းအရာကို အဓိကထား ဆွေးနွေးခြင်းအတွက် သိပ်ပြီး အရေးမကြီးလှပါ။ ထို့ကြောင့် အဆိုပါ ဆရာဝန်မှာ စာရေးသူ၏ ဆရာသမား ဖြစ်၍ ဤဘလောက်ကို ရေးသလော ဟူသည့် စောကျောချက်ကို အလိုအလျောက် ချေပပြီးသား ဖြစ်၍နေသည်။
တဖန် ကွယ်လွန်သူ အမျိုးသမီးငယ်မှာ မိမိ၏ သားသမီး ဖြစ်နေလျှင် ကျွန်တော့်အနေဖြင့် ယခုလို စေ့စေ့စပ်စပ် ရေးသားနိုင်ပါ့မလားဟု ပြောသူလည်း ရှိသည်။ အဆိုပါ မှတ်ချက်ရေးသူ ကိုယ်တိုင်ပင်လျှင် သတင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော ဆရာဝန်သာဖြစ်ခဲ့လျှင် တရားဥပဒေအတိုင်း မျှမျှတတ ဖြစ်လိုပါသလော ဟု အမေးကို အမေးဖြင့် တုန့်ပြန်လိုသည်။
မှတ်ချက် ပြုသူ တစ်ဦးကမေးသည် မိမိသာ စာနယ်ဇင်းသမား ဖြစ်လျှင် ဤသတင်းကို မည်သို့ ရေးသားမည်နည်းဟုပင်။ မိမိကိုယ်တိုင် ကဗျာ မရေးတတ်။ သို့သော် ကဗျာဆရာမ ရေးသားထားသော ကဗျာလေးက ဖတ်လို့ကောင်းသလား ကြိုက်သလား ဆိုသည်ကိုတော့ ပြောတတ်လေသည်။ ထို့အတူ မိမိကိုယ်တိုင် မချက်တတ်သော ဟင်း ကို ဆိုင်တွင် သွားစားပြီး သကာလ ကြိုက်သလော ကောင်းသလော ပြောနိုင်ကြ၏။ ရုပ်ရှင်ဝေဖန်ရေး လုပ်သူသည် ရုပ်ရှင် ဒါရိုက်တာ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်မည်၊ သရုပ်ဆောင် အတတ်ကို တတ်ချင်မှ တတ်မည် သို့သော် ဝေဖန်ရေးကတော့ လုပ်သည်ပင်။
မိမိ သိနားလည်သလောက် ဝေဖန်ရာတွင် လူကို ဝေဖန်ခြင်း နှင့် အပြုအမူကို ဝေဖန်ခြင်းဟု နှစ်မျိုးရှိသည်။ ဥပမာ - ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကား၏ သရုပ်ဆောင်မှာ ကျော်ဟိန်း ဆိုပါစို့ရဲ့။
လူကို ဝေဖန်သူက ဒီလိုပြောမည် …
“ကျော်ဟိန်းကတော့ နာမည်ကြီး မင်းသားသာ ဆိုတယ် ညံ့လိုက်တာ လွန်ပါရော”။
အပြုအမူ ကို ဝေဖန်သူကတော့ ဒီလို ပြောမည် …
“အဲဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ ဘယ်နားက ဇာတ်ဝင်ခန်းမှာပေါ့ ကျော်ဟိန်း အရက်သောက်တဲ့ပုံ သရုပ်ဆောင်တာကတော့ လုံးဝကို သရုပ်မတူဘူး။”
စာရှုသူ မိတ်ဆွေများ ဤဝေဖန်ချက် နှစ်မျိုး အနက် မည်သည့်နည်းက ဓမ္မဓိဋ္ဌာန် ကျသနည်း။ စဉ်းစားကြပါကုန်။
The duty of the primary or departmental enquiry is to determind whether there were lack of "Service, Sympathy and Humanity" especially "lack of Huminity", not upon the "lack of Technical Skill".
"Technical Skill" was already determined by the board of examiners.
If you know these guidelines, you can be able to determind the tragedy.
The journalist will mention by their own criteris as an effect.
I like the response of 99 Sanay. Of cos, we all have been facing with those kind of problems more or less in our life or around us. Well, we all know the truth! How the health care systems work here in Myanmar. Needless to say! But in this topic, it's mentioned that the role and aspect of media in Myanmar. If you think Media is unfair, what is the thing that we can say "FAIR" ??? Does media has the freedom of expression? Anyhow, I agreed that Doctors are careless in general where it's concerned with "LIVES", sorry to say that.
လူနာတွေကို ဂရုမစိုက်တဲ့ဆရာဝန်တွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ဂရုစိုက်တဲ့ ဆရာဝန်တွေလည်း အများကြီးရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဝေဖန်မယ်ဆိုလဲ နည်းနည်းတော့ စဉ်းစားစေချင်ပါသည်။ in general လို့သုံးလိုက်ရင် ၇၀ % လောက်အထိက မကောင်းသလို ဖြစ်မသွားဘူးလား။ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံဟာ ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံးတိုင်းပြည်ထဲမှာ ပါတယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။ လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ professional standard လိုအပ်မှုတွေ ရှိနေကြဆဲပါ။ နောက်တစ်ချက်က မြန်မာပြည်မှာ ငွေမရှိရင် သေမှာပဲဆိုတဲ့ စကားက သိပ်မပြည့်စုံပါဘူး။ ငွေမရှိရင် မြန်မာပြည်မှာ မ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်နိုင်ငံမှာ မဆို သေပါတယ်။ မယုံရင် ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအကောင်းဆုံးလို့ပြောကြတဲ့ swiss ကို သွားကြည့်ပါလား။ လူတိုင်းလူတိုင်း ကျန်းမာရေးအခွန်ဆောင်ရတယ်။ အဲဒီအခွန်ကလည်း အခြေခံကုသမှုလောက်ပဲ cover ပေးတာ။ အဆင့်မြင့်ကုသမှုတွေအတွက် အိပ်စိုက် လုပ်ရတာပဲ။နောက်တစ်ချက်က ဈေးအရမ်းကြီးတယ်။ နောက်တစ်ချက်က အထူးကု ဆေးခန်းမှာ ပြမှ အသက်ရှင်မှာ ဆိုတာလဲ မဟုတ်ပါဘူး။ အခု case မှာ တောင် အထူးကုဆေးခန်းမှာ ပြလိုက်လို့သေသွားတာကြီးကို။ ရောဂါ အကြီးအသေးပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အထွေထွေရောဂါကု ဆေးခန်းတွေက လုပ်ပေးလို့ရတာတွေလည်း အများကြီးပါ။ ပိုပြီးတော့တောင် စရိတ်သက်သာသေးတယ်။
နိုင်ငံရေးစကားပုံတစ်ခုရှိပါတယ်။ လူတွေသည် မိမိတို့နှင့်ထိုက်တန်သော အစိုးရကိုသာရရှိပါသည်။ အစိုးရရဲ့ လက်အောက်မှာ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုလည်း ပါဝင်လို့ အဲဒီစကားပုံကို နည်းနည်းလေးပြင်လိုက်ရင်" လူတွေသည် သူတို့နှင့် ထိုက်တန်သော ကျန်းမာရေးစနစ်ကိုသာ ရရှိသည်" လို့ပြင်ရေးလို့ရပါတယ်။
ဒီဟာလေးလဲ ဆက်ရှင်းပါဦး ........
သူသာ ဒီသတင်းကို မတင်ပြခဲ့ရင် ...ဘယ်လို ပြီးသွားမယ်ထင်ပါသလဲ ဆရာ......
ဒီလို သတင်းမျိုးဆိုတာက ရန်ကုန်မှာကတော့ ဂျာနယ်က မရေးလည်း သူ့ဘာသာသူပြန့်မှာ ပါပဲ။ ဂျာနယ်ကရေးလိုက်တော့ လူတွေမြန်မြန် ပိုသိသွားတာပေါ့။
ကျွန်တော့် အမြင်ကတော့ လူနာရှင်အနေနဲ့ ဂျာနယ်ထဲမှာ ထည့်တာထက်စာရင် တရားရုံးကနေ တိုက်ရိုက် တရားစွဲတာက ပိုပြီး စနစ်ကျမယ်ထင်ပါတယ်။ ၂ ရက်ကို ၁၁ သိန်း ပေးပြီး ဆေးရုံတောင် တက်နိုင်သေးတာ... ငွေနည်း တရားရှုံးတော့ မဖြစ်လောက်ပါဘူး။
Above response is funny! yes, News can be spread out for certain extent but published news work more effective way. How dare you mentioned to sue directly to the hospital? and 11 lakhs? If we were patients, we must pay the cost whether we have or not? How come you can say that words without seriousness? You never know how the bereaved family got this amount to pay the cost. I think you have no empathy. Of cos, you areadoctor? No wonder you stand for them. The objective of this blog is to protect the doctors and stand for them regardless of right or wrong.
Medical Negligence isacrime and it is best resolved by Law. Patient can sue anybody hospital or surgeon if they think they do not recieve enough care. It is patient's right. Nobody can deny it.By the way, I do not protect SSC or surgeon but I must protect name of respectful doctors and caring doctors. Everybody knows SSC is so expensive and yet they go to that hospital and chooseasurgeon with at least3master degrees. That kind of family do not haveaproblem to find 11 lakh.
ဆရာဝေဖန်ပြသွားတာကို ထောက်ခံပါတယ် ဒါပေမယ့် မြန်မာနိုင်ငံက ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံကြီးတွေ နဲ့ ဆရာဝန်ကြီးတွေရဲ့ ငွေမျက်နှာကလွှဲလို့ကျန်တာ ဘာမမကြည့်တယ့် အလေ့အကျင့်ကတော့ အမှန်အကန် ဖြစ်ပေါ်ထွန်းကား နေတယ်ဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်တို့လက်ခံရပါလိမ့်မယ်။ အဲ့လိုဖြစ်လာရတာကလဲ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံတော်အစိုးရဘက် က ပြည်သူတွေဘက်က မရှိပဲ ငွေရှင်တွေဘက်က ရပ်တည်နေကျလို့ပဲ။
အဲဒါကတော့ မှန်ပါတယ်။ အပြင်လူတွေထက်စာရင် ကျွန်တော်တို့က ပိုသိတာပေါ့။ဒါပေမယ့်လည်း ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ သူတို့ကို ထိန်းသိမ်းပေးမဲ့ regulation တွေလိုအပ်နေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်မကောင်းဖြစ်ရင်လည်း သူတို့ကလွဲပြီး ပြစရာမရှိဘူးလေ။ လူတွေလည်း အသိစိတ်ကလေးနဲ့ ပြောင်းဖို့လိုသလို စနစ်ကိုလည်း ပြောင်းရမှာပါ။ ကြားထဲမှာ မလိုအပ်ဘဲ နစ်နာမှုတွေ အသက်ဆုံးရှုံးမှုတွေ ထပ်မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ဘဲ ဆုတောင်းပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ အစိုးရဆေးရုံလည်း အစိုးရဆေးရုံအလျောက် ပုဂ္ဂလိကလည်း ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံအလျောက် Protocol ချပြီး
ကြပ်ကြပ်မတ်မတ်လုပ်နိုင်ရင်ကောင်းမယ်ဗျာ။ လူဆိုတာတော့ ဘယ်လောက်စေတနာထားထား၊ ဘယ်လောက်အတွေ့အကြုံ၊ ပညာရှိရှိ တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့လစ်ဟာတတ်ကြတာပါပဲ။ အထူးသဖြင့် တိတိကျကျ သတ်သတ်မှတ်မှတ် တာဝန်ခွဲဝေထားခြင်းမရှိတဲ့အခါ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦးကြားမှာ တာဝန်ယူမှုလေးတွေ လစ်ဟင်းနိုင်ပါတယ်( ယခုကိစ္စမှာ လစ်ဟင်းတယ်လို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး )။
Human Error, Equipment Error, Policy Error, ....
အခုကိစ္စမှာလည်း အမှားဖြစ်ခဲ့ရင်လည်း Human Error တစ်ခုတည်းလို့တော့ပြောလို့မရပါဘူး။...
The objective of this blog is to protect the doctors and stand for them regardless of right or wrong.
အထက်က မှတ်ချက်ဟာ အခု ဆွေးနွေးနေတဲ့ ပို့စ် တင်မက၊ဘလော့ တခုလုံးရဲ့ရပ် တည်ချက်ကိုပါ တိုက်ခိုက်ရေးသားလာတာကို တွေ့ ရလို့ အတော် အံအားသင့် စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရ ပါတယ်။
ဒီလို ရည်ရွယ်ချက် ကို မဝေဖန်ခင်မှာ ဘလော့ တခုလုံးနဲ့ ရှိနှင့်ပြီးသား ကွန်မင့်န် မှတ်ချက်တွေကို ဖတ်ရှု လေ့လာပြီးပါစ လို့လဲတွေးမိလိုက်တယ်။ ဆရာဝန်တွေကို မှားမှားမှန်မှန် အကာအကွယ်ပေးဖို့ ရည်ရွယ် လုပ်ဆောင်နေခဲ့တယ်ဆိုရင် မှတ်ချက်ပေးသူ အပါအဝင် အားပေးသူ ဘယ်ရှိပါ့မလဲ။ အဲဒီလိုစွပ်စွဲချက် မှတ်ချက်မျိုး အစား အသိပညာ ဗဟုသုတရလို့ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းမှတ်ချက်တွေပဲ အများစု တွေ့ရ ပါတယ်။
တခါ ဒီပို့စ်ဟာ သတင်းရေးသားခြင်းကို မတိုက်ခိုက်ပဲ ရေးသားပုံမှာ မရေးသင့် မရေးထိုက်တာ ကို ဘောင်ကျော် မရေးဖို့ အသားပေး ဝေဖန် ဆွေးနွေး ထားတာ ဖြစ်ပါလျက်နဲ့ အခုပေးလာတဲ့ ထင်မြင် ယူဆချက်က တခါ မဆီမဆိုင် ပို့စ်ရဲ့ ဘောင်ကျော်ပြီး ဘလော့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို မဟုတ်တမ်းတရား စွပ်စွဲ တိုက်ခိုက် လာပြန်တော့ သြော်- လွဲလိုက်ပြန်ပြီ လို့သာ။
အခုအချိန်ထိ မှတ်ချက်တွေကို ခြုံငုံလေ့လာကြည့်မိတဲ့ အခါ ဆရာဝန်ဆိုတဲ့ လူတန်းစား အပေါ်မှာ အမုန်း တရားတွေ ထားကြတာ မကျေနပ်မှုတွေ ပွားကြတာ အတော်လေး စိတ်မကောင်းစရာ တွေ့ရပါတယ်။
ဘာကြောင့်လဲ ဝန်ဆောင်မှု ပေးရတဲ့ လုပ်ငန်းမို့ လူ့အလို ဆရာဝန် မလိုက်နိုင်တာလား? တခြား ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းတွေမှာ ကျတော့ ကိုယ့်အမြင် ကိုယ့်ရပိုင်ခွင့် ဆိုပြီး မအော်ရဲကြ မပြောရဲကြတာတွေ ရှိနေ ပြန်ရော။ ဥပမာ- အထူးလိုင်း အဲကွန်းဘတ်စ် ဆိုပြီး မအေးတာ၊ လူပိုတင်တာ၊ ကားချင်းပြိုင်ပြီး အန္တရယ် ဖြစ်လောက်အောင် မောင်းကြတာ။ စပယ်ယာ ကိုရော ဒရိုင်ဘာကိုရော တိုက်ရိုက်တွေ့နေကြ လျက်သားနဲ့ ပြောရဲကြဘူးဗျ။
ဘတ်စ် စီးတဲ့ကိစ္စက အသေးအမွှားမို့ပါလို့တော့ မပြောနဲ့နော်။သူလဲ လူသေစေနိုင်တဲ့ကိစ္စပါပဲ။ အသက်နဲ့ ယှဉ်ပြီးဆုံးရှူံးရမှု မို့အထိအခိုက် မခံနိုင်တာ မကျေမနပ် ဖြစ်ရတာဆိုရင်လဲ ဆရာဝန်တွေထက် လူအသေ အပျောက် ပိုဖြစ်စေတဲ့ လူတန်းစားကလည်း ရှိပြန်ရော။ ရှူး- တိုးတိုး သူတို့ကိုကတော့ မပြောရဲ မဆိုရဲ မို့ ဆရာဝန်တွေကို ပိုမုန်းမိတာပါဆိုရင် ဆရာဝန်တွေ ကယ်တင်နေတဲ့ အသက်ပေါင်းများစွာကိုတော့ ထည့်ပြီး ပြောမယ့် ဆိုိမယ့်သူ မရှိကြပြန်တာ ရင်နာစရာ။
အခု မှတ်ချက်တွေကို ဖတ်ကြည့်။ ကျွန်တော့် ဘကြီးတုံးက၊ ကျွန်မ ဂျီးဒေါ်ကြီးတုံးက၊ ကျုပ် အဖေတုံးက အမေတုံးက ဒီလိုဆရာဝန်ကြောင့် ကြောင့် ကြောင့် ကြောင့် မဖြစ်သင့်ပဲပဲပဲပဲ။ ကဲ - ကျုပ်တို့ ဆွေတော်မျိုးတော်တွေထဲမှာ ဗမာ ဆရာဝန် တွေ ကယ်ပေး ကုပေးထားတာ တယောက်မှ မတွေ့ရပါလား။
ဒါကြောင့်လဲ ကျွန်တော်ဝင်ရေးနေမိတာပါ။ ကြားဖူးသလို “ လူ၏ အကြိုက်။ ဆယ်ခါလိုက်လဲ၊ မလိုက်တခါ ရှိခဲ့ပါမူ- ရှိခဲ့ပါမူ-ရှိခဲ့ပါမူ ” ကျွန်တော်တို့ လူမျိုးရဲ့ ဘာသာနဲ့ ယဉ်ကျေးမှု အဆုံးအမတွေမှာ ကျေးဇူးတရားရဲ့ ဆန့်ကျင်ဖက်ကို ဂုဏ်ဖေါ် ညွှန်းဆို တိုက်တွန်း ဆုံးမတာတော့ မရှိခဲ့တာ သေချာပါတယ်။
yeah Won is right. the objective of this blog is just to save the doctors' dignity and fame. It is rediculous to sueadr in burma and it is obvious that we have no tradition or rule or regulation to do so.
I think it isacoward way to suggest to sueadoc atacourt in burma. If we can do so like western countries, i can tell what the result is.
Is it wrong to protect one's profession when insulted by people? Everybody do that. Let me ask uaquestion, "have u heard ofalaw that patients cannot sue doctors?" Or "had u ever denied of right to sueadoctor in Myanmar?" If not, don't say like that. Tradition means nothing in law or science. Most of myanmar traditions are useless. I am not convincing u that doctors in our country are very hard working, ethical, caring and empathy, I am just telling there are also good doctors, u should respect them.
It was amazing advice given to sue hospital and doctors. Has anyone seen any reliable judgement system in Myanmar?? I hope this case will be the beginning of justice.
Every negligent doctor should be sued, i don't remember exact code but depending on severity of case, up to 10 years of imprisonment can be given.
၁။ ဖွံဖြိုးပြီးနိုင်ငံများတွင် ဆရာဝန်သည် ကျေးဇူးရှင်များမဟုတ်ကြပါ။
ဈေးသည်များသာဖြစ်ပါသည်။ ကုသရေးဝန်ဆောင်မှုကို ရောင်းချသူများဖြစ်ပါသည်။
၂။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆရာဝန်များသည် ကျေးဇူးရှင်သဖွယ်ဖြစ်နေရပါသည်။
လူနာသေဆုံးသွားလျှင် သတင်းစာတွင် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကြော်ငြာထည့်ကြပါသည်။
၃။ ဆိုင်များတွင် ၅၀၀တန် ပစ္စည်းရှိသလို
အမြတ်နည်းသဖြင့်အရေအတွက် နှင့်ရောင်းချရပါသည်။ ၅၀၀တန် စားနိုင်သူက
၅၀၀တန်စားပြီး၊ ၅သိန်းတန် မစားနိုင်သူက မိမိတတ်နိုင်သလောက်ကိုသာ
၀ယ်စားရကြပါသည်။ ၅၀၀တန်စားသူက ၅သိန်းတန်လောက် မကောင်းမှန်းစားသုံးသူက
ကြိုတင်သဘောပေါက်လက်ခံပြီးဖြစ်နေရန်လိုပါသည်။ ဥပမာ- ဈေးပေါသည့်
မယ်လမင်းနို့်မှုန့်၊ ခဲဒါတ်ပါကလေးကစားစရာ၊ ဘာအတုညာအတု။ သို့သော်
ဆရာဝန်နယ်ပယ်တွင်တော့ Grade A အဆင့် ကုသရေး၊ Grade B အဆင့်ကုသရေး၊ Grade
C စသည်ဖြင့်ခွဲခြားကုသရန် အဆင်မပြေနိုင်ပါ။
၄။ ရှေ့လျှောက်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် နိုင်ငံရေးသည် (The Voice အဆိုအရ)
နယ်ပယ်အသီးသီးတွင်မကျေနပ်သည်များကို တိုင်တန်းတရားစွဲခြင်းများလဲ
တချို့သောဆရာဝန်များသည် အမြင့်ဆုံးအခြေအနေ ဖြင့်သာတင်းတိမ်နိုင်ကြသည်။
တချိူ့ကတော့အဆင်ပြေလျှင် အိုကေသည်။ ဆရာဝန်ရသော ငွေနှင့်
ဆေးရုံသို့ပေးလိုက်ရသော ငွေ မတူညီပါ။ ဆေးရုံသို့ပေးလိုက်ရသောငွေ ထဲမှ
အစိတ်အပိုင်းတခုကိုသာ ဆရာဝန်ရပါသည်။ ကျန်တာကို ဆေးရုံကရပါသည်။
သို့သော်ကျန်သည့်ငွေအားလုံးတော့ မဟုတ်ပါ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံး
နိုင်ငံတည်ဆောက်ရေးအတွက် အခွန်အခ ပေးရပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင်
အာဆီယံနိုင်ငံများထက် ပိုပြီးအခွန်အခကျသင့်ပါသည်။ ထို့ပြင်
လူနာများက ဆေးဝယ်လျှင်၊ ဆေးကုသလျှင် ဈေးပိုပေးပြီးဝယ်ယူကြရပါသည်။
ပေးသူကားအပြည့်ပေး၏ ရမည့်သူက အပြည့်မရဖြစ်နေရပါသည်။
၆။ လက်ရှိတွင် အထူးလျှော့ဈေးနှင့်ဆေးကုကာ
အချိန်မပေးသဖြင့်လွဲခြော်မှုဖြစ်ခဲ့သော် ၂ ဖက် စလုံး ဘ၀နှင့်ရင်းပြီး
ယူရန်သာဖြစ်နိုင်ပါသည်။ Hitstory Taking, Physical Examination တို့ကို
အပြည့်အစုံမေးရန်မှာ ဆရာဝန်၏ consultant fee တွင်ပါဝင်ပြီးဖြစ်ပြီး၊
လိုအပ်သည့် Lab Test, Imagine များကို လူနာ၏ ရောဂါ Diagnosis
ရရှိရန်စစ်ဆေးသည့်အခါ လူနာ၏ finial situation ပါ ပါဝင်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာဝန်မှလည်း သူ၏နာမည်ထိခိုက်မှုကို ကြိုတင်ကာကွယ်ရန် နှင့် လူနာ၏ရောဂါ
အမည် လွတ်ထွက်မသွားစေရန် (မမျှော်လင့်ထားသော ရောဂါများလွတ်မထွက်စေရန်)
ရောဂါအမည်သာဖော်နိုင်ပြီး ကုသရန် ငွေမကျန်အခြေအနေဖြစ်နေနိုင်ပါသည်။
၇။ နိုင်ငံတကာ အဆင့်ကုသရေးအတွက် နိုင်ငံတကာပေါက်ဈေးဟု ဆိုပြန်ရာတွင်
နိုင်ငံသားအားလုံးသည် နိုင်ငံတကာပေါက်ဈေး မသုံးနိုင်သဖြင့် သေ
ရုံသာရှိပါတော့သည်ဟုပြောလို့ ရပြန်သည်။ ဈေးသည်က ဈေးဝယ်ကို မတတ်နိုင်ရင်
မ၀ယ်နဲ့ဟုပြောလို့ရပေမယ့်၊ ဆရာဝန်ကတော့ မတတ်နိုင်လျှင် မကုနဲ့ ဟု
ပြောရန်မဖြစ်နိုင်ပါ။ ယခုနေရာတွင် ကျန်းမာရေး အာမခံ လုပ်ငန်းကဲ့သို့သော
Third Party တခုပေါ်ပေါက်လာလျှင်တော့ အဆင်ပြေ နိုင်သည်ပေါ့။ သို့သော်
၈။ အာမခံလုပ်ငန်းရှိလာပြန်ဦးတော့ အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် ဘန်(Bank) အကြား၊
သို့မဟုတ် အာမခံလုပ်ငန်းနှင့် ဆေးရုံအကြား လျှင်မြန်သော ဆက်သွယ်ရေးစနစ်က
လိုလာပြန်သည်။ လူနာတယောက် ဆေးရုံလာတက်သည်နှင့် အာမခံထားခြင်းရှိမရှိကို
စစ်ဆေးရန် အာမခံလုပ်ငန်းရှိ Customer Service Database ၀င်ကြည့်ရန်
ယခုအကြောင်းကိုတော့ ဆက်မပြောတတ်သဖြင့် ဆက်မပြောတော့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု
၉။ ထိုသို့ဆိုလျှင် လူနာနှင့် ဆရာဝန်အားမမျှသည့် ဆေးရုံဆိုလျှင်ကော။
အရေးပေါ်လူနာကိုစစ်ဆေးနေချိန် နောက်ထပ်လူနာတဦး ရောက်လာပြီး
၁၀။ မြန်မာပြည်သားများ ကားအလွန်ကြိုက်ကြပါသည်။ လွန်ခဲ့သော ၂၀နှစ်ကျော်မှ
တန်ဖိုးကြီးကားများကို ဈေးကြီးပေးဝယ်တတ်ကြပါသည်။ ထို ယိုင်တိုင်တိုင်
ကားများ တခုခုပျက်သဖြင့် car workshop ရောက်လျှင် တခုဖြုတ်လိုက်ပါက
သုံးမရသဖြင့်လဲလှယ်ရန်သာ လိုအပ်သည်။ အင်ဂျင်ဖြုတ်ချလိုက်တော့
လဲလိုက်ပါပြီ အင်ဂျင်ကော၊ အင်ဂျင်အထိုင်တုံးကော။ အင်ဂျင်လဲတော့
ကားဘော်ဒီပါမြင်ရပါသည်။ အားပါးပါး စွေးနေပြီပဲ။
အော် ဖရိန်လား သူလဲစွေးတာကြာပေါ့။ တန်းလား -ရှေု့တန်းကောနောက်တန်းကော။
ကားပိုင်ရှင်သူဋ္ဌေးကြီးရယ် တစီးလုံးသာ လဲမှရမည်ဟု workshop ဆရာကြီးများက
မညှာမတာပြောတတ်ကြပါသည်။ တနွယ်ငင် တစင်ပါ ကားတစ်စီးလုံးလဲမှ
၁၁။ ကဗျာ တပုဒ်ကိုသိပ်မမှတ်မိတော့ပါ။ ပေါက်ပင်ဘာလို့ ကိုင်းရတယ်၊
အဆုံးထိတော့ မမှတ်မိတော့ပါ။ ဆိုလိုချင်သည်က ပြသာနာတခုလုံး အတွက်
ပေါက်ပင်ကို နှုတ်လိုက်ပြီး၊ ဗျိုင်းကို သတ်စားလိုက်ရုံပဲ ဆိုလျှင်
ထိုအခြေအနေတွင် ဗျိုင်းနှင့် ပေါက်ပင် သည် အဒိကတရားခံ
၁၂။ ကောင်းမွန်သောတိုင်းပြည်ကို အုပ်ချုပ်သည်မှာ ဥပဒေမဟုတ်၊ ဘုရားဟောသော
ကျင့်ဝတ်များဖြင့်ဖြစ်သည် ဟုဖတ်ဖူးပါသည်။ တခါက တကယ့်ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပါသည်။
အမေရိကန်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။ အချက်အလက် ရှာဖွေရန် စိတ်မရှည်သဖြင့်
အကျဉ်းရုံးပြောပြပါမည်။ ဆရာဝန်တဦးပါဝင်လာသော ခရီးသွားအဖွဲ့ တဖွဲ့တွင်
အမျိူးသမီးတဦး ခြေခေါက်ပြီးလဲသွားသည်။ မနေနိုင်သော ဆရာဝန်က
အမျိူးသမီးသည်ဆေးရုံသို့သွားမပြဖြစ်ခဲ့။ နောက်နှစ် ၂၀ကြာသော်.......၊
ရှေ့နေတဦးသည် အဘွားအို တဥိးကို ဘယ်အတွက်ကြောင့် ခြေထောက်
ကောက်သွားသလဲမေးသည်။ အကယ်ရ ဒေါ်လာ ၁၀သန်းရလျှင် အဘွား ကျနော့်ကို တ၀က်
ခွဲပေးမည်လားဟုမေးရာ ခွဲပေးပါမည်ဟုဖြေသည်။ ထို့နောက် ထိုအချိန်က
ခရီးသွားစဉ်တွင် ကူညီခဲ့သော ဆရာဝန်ကို တရားစွဲပါသည်။ ဆရာဝန်သည်
တရားရုံးတွင်တရားရှုံးဖြစ်သွားပါသည်။ Doctor-Patient Relationship ကို
၁၃။ Doctor-Patient Relationship ဆိုတာရှိပါသည်။ ထို Relationship
၀င်သွားသည်နှင့် လူမှုရေးအရကူညီခြင်းပါဟု တရားရုံးတွင်ဖြေရှင်းလို့မရပါ။
တာဝန်ယူ နိုင်မှသာ ထိုလူနာကို ကုသရန်ဖြစ်ပါသည်။ ခင်မင်သူတဦးမှ
ဆရာဝန်တဦးကို လူမှုရေးအရ ဆေးခန်းတွင် မဟုတ်ပဲ ရောဂါအကြောင်းပြောလာလျှင်
အလွယ်ကူညီရန်၊ ရောဂါအကြောင်းမေးရန်မှာ ရှေ့လျောက်တွင် မဖြစ်နိုင်တော့ပါ။
လူမှုရေးသတ်သတ်၊ စီးပွားရေးသတ်သတ် ဟူပြီး နှစ်မျိူး
၁၄။ အလွန်ဖတ်လို့ကောင်းသောသတင်းမျိူး ကို
ကြားဖူးပါသည်။ သို့သော် သတင်း သမားတို့တွင် ရေးစရာ
အကန့်အသတ်များရှိကြောင်း နားလည်မိပါသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင်
ကျွန်တော်၏ကိုယ်ပိုင် အမြင်သာဖြစ်ပြီး၊ မည်သူ့ကိုမှထိခိုက်စေလိုခြင်းမရှိပါကြောင်း။
ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်သလောက် ပထမဆုံးထွက်တဲ့ လျှပ်တပြက်နဲ့ ဒီတစ်ပတ်ထွက်တဲ့ newsweek ထဲမှာ တစ်ချို့အချက်တွေက သိပ်ပြီး မတူဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဂျာနယ်တွေရဲ့ presentation သိပ်မတူလို့ ဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ အရေးကြီး point လေးတွေက နည်းနည်းလေးကွာနေတယ်။ လျှပ်တပြက်မှာကာ MO တွေက လူနာဆီမှာ သွေးလွန်တုတ်ကွေးရှိလို့သွေးထွက်သေဆုံးတယ်လို့ပြောတယ်။ newsweek ကကျတော့ အမေက သွေးလွန်တုတ်ကွေးအကြောင်းကို စပြောတယ်လို့ရေးထားတယ်။ သိပ်မတူဘူးဖြစ်နေတယ်။ MOတွေကသာ သွေးလွန်တုတ်ကွေးမှန်းသိရင် သူတို့ consult လုပ်သင့်တာက paediatrician ပါ။ နှလုံးအထူးကုဆိုတာ အားမနာစတမ်းပြောရရင် နှလုံးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ရောဂါတွေကိုပဲ ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ကုတတ်သူပါ။ သမားတော်တွေဟာ သွေးလွန်တုတ်ကွေးကုသမှုအပိုင်းမှာ ကလေးဆရာဝန်တွေလောက် မတော်ပါဘူး။ SSC ရဲ့ consultation guideline တွေကတော့ လက်ဖျားခါလောက်ပါတယ်။
According to the UNOFFICIAL news, SSC offered 300 lakh to the bereaved family but they denied. Hence, SSC attempted to give 1000 lakh to the junta asanext step. The the trial was closed. Just for your information!!! Can we say, SSA is sincere?
I am so sorry for the sufferer.I amapart2 medical student. This kind of news haveavery opposite effects to doctors and other medical personals. Even if it is the real fault of the doctor, other doctors are looked alike due to the fault of one doctor.
But it would be ok if the side of the doctor can givearational explanation.
I am just looking forwards to fair investigations and rational explanations.
i know nothing about the medicine and what exactly happened to the girl. But, you can't deny that the hospital was irresponsible for the cause. Just think about the situation in Myanmar. A 15 years old innocent girl died unexpectedly but there was no investigation on that case. Even journalist cannot access to the authorities of Hospital to ask about what exactly happened. And no journals ever released the news about where that incident happened and who make the surgery. They are trying to cover everything. In this situation how can you investigate steps by steps as you suggest? Asastudent studying abroad, i fully support the two journals trying to show us the news in such restrictions and in such unfavored situation in the country.
La Pyae said...
အခု အချိန်မှာ စာဖတ်ပ၇ိတ်သတ် အလိုရှိနေတာက သက်ဆိုင်ရာ ဆေးရုံ၊ဆေးခန်းမှ တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဖြေရှင်းချက်ပါ. လူနာကို အူအတက်ရောင်ရောဂါဟု သတ်မှတ်နိုင်လောက်တဲ့ ဆေးစစ်ချက် အထောက်အထား. အရေးပေါ် အခြေအနေမှာ ပြုစု ကုသမှု၊ စတဲ့အထောက်အထားတွေနဲ့ တဖက်ကရှင်းလင်းဖြေကြားချက်ကိုစောင့်မျှော်ဖတ်ရှုနေကြပါတယ်. မြန်မာတိုင်း(မ) မှ သွားရောက်ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်ကိုလည်း မည်သို့မျှတုံ့ ပြန်မှုမရှိလို့ သိရပါတယ်.
တကယ်လို့ များ ဒေါက်တာအနေဖြင့် စာဖတ်ပရိသတ်ကိုယ်စား သွားရောက်ဆွေးနွေးမေးမြန်းပြီးမှ ဒီပို့ စ် ကို တင်လိုက်ရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန် ကျေးဇူးတင်မှာပါ
This is not first story. We can know it this time only because we're in IT years.
We've to becareful when we sick.
To Ryan, don't give up on ur study becoz of negligent doctors. Follow our oath and our professional code even when others are saying bad to us. Don't blame bad ones, instead try to beagood one. Nobody can judge u except urself. Your patients will respect u when u treat them with care and empathy. Don't listen to others.
If we cannot maintain our deteriorating social status in our country, every rule and ethic will be broken one day. No more professional standards, No more social welfare.
Ye Myat said...
ဖင်မှာသွေးစုနာပေါက်လို့အပြင်ဆေးခန်းတက်ခွဲတယ်လေ
ဆရာဝန်က သွေးစုနာဆိုတော့ အေးဆေးလို့ထင်ပုံရတယ်
ဘာမှစစ်မနေပဲ ခွဲတယ် သူဆုံးသွားတယ်လေ
ဆီးချိုတွေ တက်နေတာ မသိပဲ ခွဲလိုက်ကြလို့ 
ဘာကိုယုံရမလဲဆိုလို့ ဘာကိုမှ မယုံပါနဲ့ လောကကြီးမှာ မယုံလေ သတိထားလေလေကောင်းလေလေပါ။ အဲဒါ ဗုဒ္ဒရဲ့ စကားနော်။ ကာလမ သုတ်(စာလုံးပေါင်းသည်းခံပါ) ထဲကလိုပေါ့။ ဆရာဝန်ပြောတာ မို့လို့လဲ မယုံပါနဲ့။ သူနာပြုပြောလို့လဲ မယုံပါနဲ့။ မိမိကိုယ်တိုင် လေ့လာသုံးသပ်ပြီးမှ logical ဖြစ်တယ်ဆိုမှ လက်ခံပါ။ မှန်တယ် မှားတယ် ကောင်းတယ် ဆိုးတယ် ဆိုတာ ကလည်း မြဲသောတရားမဟုတ်သောကြောင့် လောကကြိးမှာ သစ္စာလေးပါးကလွဲပြီး ကျန်သောအရာများသည် အခါခပ်သိမ်းမမှန်ပါ။ သွေးစုနာခွဲရင်း ဆုံးသွားတဲ့အစ်ကိုကြီးအတွက်တော့ စိတ်မကောင်းပါဘူး။
အစိုးရကို သိန်း ၁၀၀၀ ပေးပြီး လာဘ်ထိုးတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းမှန်လို့ကတော့ မြန်မာပြည်သူတစ်ရပ်လုံးအနေနဲ့ SSC ကို သပိတ်မှောက်သင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကိုတိုင်းလည်း နေမကောင်းဖြစ်တောင် ဘယ်တော့မှ SSC မှာ သွားမပြတော့ဘူး။
ယခုတစ်ပတ်ထုတ် Weekly 11 ဂျာနယ်တွင် ဆွေးနွေးချက်ပါ ဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းစာဆရာများ၏ မှတ်ချက်များ ရေးသားပါရှိလာသည်ကို ဤလင့် တွင် သွားရောက် ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
To KhinKyi, that's right. This is not the first time for sure. This time the victim isaclever young girl who got somewhat great promises in her life. She died unexpectedly so people become to care on that case. What about other victims living in outskirt areas of city and who are poor??? They died in vein!!! Nobody care that and no journal will write about it and the so-called hugely experienced doctors (i mean only toafew) continue to make careless mistakes, losing precious lives unnecessarily. Worse, they do not even admit that they did wrong. Of course, even if the doctor was not wrong, why don't they make press conference and make official investigation on that case? If the ELEVEN and SNAPSHOT did not present the news, we public are still deaf and know nothing. So you have no appropriate reasons to criticize on the two newspapers. You know i am not insulting any doctors in the world. I just point out what should have happened.
And for experienced doctors and prospective doctors: you guys must be able to stand those pressures because everything you do is concerned with lives; there is nth more important than 'a life' in the world. That pressure will make you better and can serve people well and with great care.
လူဆိုတာ ကိုယ်ဖြစ်ဖူးမှ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့ အမျိုးပါ..။ ဆရာတက္ကသိုလ် လှမွန် ဒီလို ကြုံရပါစေလို့ စေတနာနဲ့ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်.။
လူဆိုတာ အများက ဒီလို ဆိုရင် ဗြောင်းပြန်ဖြစ်အောင်လည်း ပြောချင်ကြတယ်လေ.။ တစ်ခုတော့ မေးချင်တာက ဆရာက SSC နဲ့ ဘာတော်လဲ..။ ဘယ်လောက်ရလဲ..။ နောက်ပြီး ကုသတဲ့ ဆရာဝန်နဲ့ ရော ဘာတော်လဲ.။ ဘယ်လောက်ရလဲ.။ ဒီလို ဂျာနယ်တွေက မအော်လို့ လူမသိ သူမသိ ကွယ်ပျောက်ခဲ့ရတဲ့ သတင်းတွေ အများကြီး ၊ သေခဲ့ရတဲ့ အသက်တွေ အများကြီး ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့ဗျာ..။
ကျနော် ကတော့ ဆရာ ဒီလိုမျိုး ကြုံပါစေလို့ပဲ စေတနာနဲ့ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်.။
I believe that Ko Zaw (i don't know him) don't really want to hurt Ko Hla Mon. But yea, sometimes it is really hard to sympathize someone's tragedy if you have never faced that. I just really feel sorry for the girl who is about my brother age. She hasalot to do in her life and her parents will havealot expectations on her as she is clever and intelligent.
Truly wish that such tragedy would never happen again to any other persons in the world :( :( :(
ကျီးတွေလို ကိုယ့်ကိုထိတာနဲ့ ဝိုင်းအာဖို့ပဲ တတ်တဲ့လူတွေ ... ရွံစရာကောင်းပါ့
စာနယ်ဇင်းကျင့်ဝတ်လေး ဘာလေးနဲ့ အရူးချီးပန်း သွေးရူးသွေးတန်းလျှောက်ပြောမနေနဲ့ ... ကိုယ့်ဘက်က တာဝန်သိတတ်ရင် ဘယ်သူကမှ ဘာမှ ပြောလို့မရဘူး ဆိုတာ နားလည်ထားလိုက်စမ်းပါ
ဝါရင့် သတင်းစာဆရာကြီးတွေက ဘာပြောလဲဆိုတာ အောက်မှာ သွားဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦး ‎‎...‎
ကိုယ့်ထိတော့ တယ်လဲ နာတတ်ကြပါလား ကိုယ့်လူတို့ရဲ့ ...‎
ခင်ဗျားတို့ အထူးကုန်ဆရာဝန်ကြီးဆိုတဲ့ ငနဲတွေ တာဝန်မဲ့မှု၊ တလွဲတချော်လုပ်မှုတွေကြောင့် ‎အသက်ဆုံးရတဲ့ လူနာတွေ ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်လောက်ရှိနေပြီလဲ ... အဲဒါကျတော့ ‎ဘာမှ မပြောတော့ဘူးလား ...‎
လူနာဆိုတာ ဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးဗျ ... အရေးကြုံရင် ခင်ဗျားတို့ ‎ဆရာဝန်ဆိုတဲ့သူတွေရဲ့စကားအတိုင်းပဲ အားကိုးတကြီးလိုက်နာကြရတာပဲ ... အဲဒါကို ‎ပေါ့ပေါ့ဆဆ ထင်ရာလုပ်သူကိုတော့ ခင်ဗျား ဘာမှ ပြောမထားပါလား ... ကိုယ်ချင်းစာစမ်းပါ ‎‎... တာဝန်ယူတတ်၊ တာဝန်ခံတတ်တဲ့စိတ်နဲ့ ကြည့်စမ်းပါ ... ‎
ခင်ဗျား သားသမီး အဲဒီလိုဖြစ်ရင် ခင်ဗျား ဘယ်လို ခံစားရမလဲ ကိုယ့်လူ ‎
အခုတော့ အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲ ကိုယ့်အမှားကို ထောက်ပြတဲ့သူတွေကို ခင်ဗျားက ‎လိုက်အပြစ်တင်နေပါလား ....‎
ငယ်နိုင်ဆိုတဲ့ ငနဲမကရော ... ပုံအပ်တယ်တွေ ဘာတွေ အရူးချီးပန်းပြောနေတယ် ....‎
အဲဒီ အထူးကုန်ငနဲတွေက လူနာကမေးရင် စိတ်ရှည်လက်ရှည်နဲ့ နားလည်အောင် ရှင်းပြတဲ့သူ ‎ဘယ်နှစ်ယောက်များ ရှိသလဲ ... ရှိရင် ပြစမ်းပါ ... မြင်ဖူးချင်လို့ ... ညတိုင်း ‎ဦးချပြီးအိပ်ချင်လို့ပါ ... (ကိုယ်တွေ့နော် ... ကိုယ်တွေ့ ... လိုအပ်ရင် နာမည်ပါ ပြောပါ့မယ် .... ‎အထူးကုန်အသပြာဆရာဝံကြီးရဲ့ အားကိုးတကြီးမေးမိတဲ့ လူနာအပေါ် တုံ့ပြန်ပုံတွေ)‎
Responsibility & accountability ဆိုတဲ့စကားကို ခင်ဗျားတို့ ‎အထူးကုန်အသပြာဆရာဝံကြီးတွေ ကြားဖူးကြရဲ့လား ... ကြားဖူးရင်လဲ မေ့ကုန်ပြီလား ...‎
ကိုယ့်အမှားကို ကိုယ် ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့ တာဝန်ယူတတ်ရဲ့လား ... ကျုပ်တော့ တခါမှ ‎မကြားဖူးဘူး ....‎
အဲဒါတွေကို တရားစွဲတဲ့အလေ့အထ မြန်မာပြည်မှာ ပေါ်ထွန်းသင့်တာ ကြာပါပြီ ... ဒါမှပဲ ‎အဲဒီငနဲတွေ မှတ်လောက်သားလောက်ရှိသွားပါလိမ့်မယ် အခုကျတော့ ကိုယ်မှားလို့ ‎လူနာဘာဖြစ်ဖြစ် ပြသနာမရှိဘူးလေ ... ပိုက်ဆံက ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် ရပြီးပြီကိုး ... ဒါပဲပေါ့ .... ‎
professional မပီသတဲ့ငနဲတွေ ... ရွံလိုက်တာ
ကျုပ်ကတော့ အလဲဗင်းနဲ့ လျှပ်တပြက်ကို လုံးဝ (လုံးဝ) အကြွင်းမဲ့ ချွင်းချက်မရှိ ‎ထောက်ခံပါတယ်
“ လူဆိုတာ ကိုယ်ဖြစ်ဖူးမှ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တဲ့ အမျိုးပါ..။ ဆရာတက္ကသိုလ် လှမွန် ဒီလို ကြုံရပါစေလို့ စေတနာနဲ့ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်.။ ”
ကြားဖူးတယ်ဗျာ၊ စေတနာ ဆိုတာ “ ကံ ” ပါတဲ့ ။ တခါ ကံဆိုတာဟာ တူသော အကျိုးကိုပေးတတ်ပါတယ်တဲ့။ နောက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင် ကံ၊ ကံ၏ အကျိုးကို ယုံကြည် ရတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တော့ ကိုဇော့် အတွက် စိတ်မကောင်းလည်း ဖြစ်မိတယ်။ ကြောက်လည်း ကြောက် မိပါရဲ့။
ဒီအဖြစ်အပျက်မှာ စိတ်မကောင်းစရာ သေဆုံးမှု တခုကို လျှပ်တပြက်ဂျာနယ်က စ ရေးတယ်။ သတင်းတစ်ပုဒ် အနေနဲ့ ကျန်းမာရေးစေါင့်ရှောက်မှု တိုးတက်လာစေဖို့ ရေးတာကို ဘလော့ဂ် ပို့စ် ရေးသူက ကြိုဆိုထားတယ်။ ဒါပေမဲ့ စည်းဘောင်ကို ကျော်ပြီး ကိုယ်နားမလည်တဲ့၊ အတိအကျ မပြောနိုင်ပဲ စွပ်စွဲအပြစ်ပေး ရေးသားထားတာကိုတော့ ကန့်ကွက်တယ်။ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ ဆရာဝန် ဆေးခန်း အပြစ်ရှိတယ်၊ အပြစ်မရှိဘူးဆိုတာ တက္ကသိုလ် လှမွန် ပြောမထားပါဘူး။ ပြောလို့လည်း မရနိုင်သေးပါဘူး။ သူတင်မဟုတ်ပါဘူး၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတဲ့ အချက်အလက် ရှာဖွေစုဆောင်းရေး အဖွဲ့တောင် အသေးစိပ်လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက် အထောက်အထားတွေကို ရှင်းလင်း တိကျအောင် ရှာဖွေ သုံးသပ်နေရဆဲ ဒီအချိန်မှာ ဘယ်နေရာမှာ မှားယွင်းလဲ? ဘယ်သူမှာ အပြစ်ရှိလဲ? မပြောနိုင် သေးပါဘူး။
ဒီတော့ဗျာ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှ ပို့စ်ရေးသူကို ဒီလို ဆုတောင်းမေတ္တာမျိုး မပို့သင့်ပါဘူး။ အရည်မရ အဖတ် မရ အကုသိုလ်ကို အချောင်ဝင်ယူ နေသလိုမျိုး ဖြစ်နေပါရောလား။ ကျွန်တော်တော့ဗျာ ကိုဇော်ကို အဓိက ထားပြီး သတ္တဝါ ဝေနေယျ အားလုံး ဒီလို ရင်နာစရာ အဖြစ်ဆိုးမျိုး ဘယ်သူမှ မကြုံကြပါစေနဲ့လို့ အလေးအနက် မေတ္တာမွန် ပို့သလိုက်ပါရစေ။ ကြေပါစေဗျာ။
Every professional person has more responsibility than normal people. Failure to do so is breaching the law and is the tort of negligence. Our country has very poor legal enforcement. Most of the professional person always takes advantage on that. They do not have professional ethic. Patients were totally relied on Doctor’s professional advice. If you really want to talk about this case from legal point of view, let me suggest you to learn more about legal concept.
လူတိုင်းမှာ လွတ်လပ်စွာ သဘောထားကွဲလွဲပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။ အဲဒါ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဗမာလူမျိုးတွေက ရိုးကြတာပဲလား။ စစ်မှန်တဲ့တရားဥပဒေနဲ့ ပဲ မကြုံဘူးလို့လား။ ဒုတိယ ဟာက ပိုပြီးဖြစ်ဖို့များတယ်။ ဆရာတက္ကသိုယ်လှမွန်က စည်းထဲဘောင်ထဲကပြောတာပါ။ သူရဲ့တင်ပြချက်တွေကို ကျွန်တော်လည်း အကုန်လုံးလက်မခံပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူရေးကတာ နည်းလမ်းကျတယ်။ အလယ်အလတ်ကျတယ်။ liberal ကျတယ်ပေါ့ဗျာ။ အဲဒီတော့ လူနာရှင်ဘက်က သိသိသာသာလိုက်ပြီးမရေးတိုင်း SSC ဘက်ကရေးနေတယ်လို့ ဘာဖြစ်လို့ ပြောနေကျတာလဲ ခင်ဗျာ။ လောကကြီးမှာ မှန်တာနဲ့ မှားတာ နှစ်ခုတည်းရှိတာမှ မဟုတ်တာ။ နည်းနည်းမှန်တာ နဲ့ နည်းနည်းမှားတာလည်းရှိသေးတယ်။ မှန်လည်းမမှန်ဘူး။ မှားလည်း မမှားဘူးဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်လေ။ ကိစ္စတစ်ခုကိုတွေ့ရင် separate right or wrong လို့မသတ်မှတ်ဘဲ continouse process လို့ သဘောထားပေးကြပါ။ ကိုယ့်အမြင်နဲ့ မတူတိုင်း SSC နဲ့ ဘာအမျိုးတော်လဲ။ ဘာတွေ လာဘ်စားထားလဲ စတဲ့ မဆီမဆိုင် စွပ်စွဲချက်တွေ မပြောကြပါနဲ့။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့သလိုပဲ လွပ်လပ်ရေးကို လိုချင်ရင် အင်္ဂလိပ်တွေကို ထိုင်ဆဲနေရုံနဲ့ မပြီး။ ကိုယ့်လူမျိုးဟာ လွပ်လပ်ရေးနဲ့ ထိုက်တန်ကြောင်း ပြသဖို့လိုတယ် ဆိုတာမျိုးပေါ့။
ဆောင်းပါးကိုဝေဖန်ကြပါ။ လူကို မဝေဖန်ကြပါနဲ့။
As the saying goes "Arguments win the situation but lost the person", I can see, the tendency is going to get worse relations between doctors and the public. The thing that we can find out in this trial is "public" have been shown up their angers and hatreds upon doctors. In fact, I feel sorry for that. I am sure there are many doctors who are working for the communities with strong commitment. But at the same time, we can learn lots of sad stories of losing LIVES by irresponsible doctors. In this regard, I suppose, doctors are practicing paternalism (it doesn't mean to ALL); they are so proud of what they have learned (especially, surgeons with long tails) and treat the people as their subordinates? or people are not deserving to be explained about what they are really suffering? Isn't every human was born with equal dignity, rights and freedom? If we think of simply, the doctors are supplier, patients are customers, we deal with MONEY! (here we deal with LIVES) Thus, if something is happened in case, who is more responsible? suppliers or customers? Okay, asaresult of all those comments, what is the solution? Doctors need to be changed or entire population need to change their attitude? Who knows! Just frustrated, disappointed with .......... :(
Dr. Nay Oo သို့
ကျနော်ပြောတာကို အဓိပ္ပါယ်ပေါက်လွဲသွားတယ် ထင်တယ်.။ ကျနော်လည်း ဒီလို ခံစားခဲ့ရဖူးတယ်ဗျ.။ ကျနော့်အဖေကားတိုက်ခံရတော့ ဆေးရုံမှာ ဒီအတိုင်းပစ်ထားတာ ခံရတယ်.။ Unknow တဲ့.။ ဒါလည်း လူပဲလေဗျာ.။ မနက် ၈ ခွဲကဖြစ်တာ.ညနေ ၄ ခွဲမှ သိရတယ်.။ လိုက်သွားတော့ ကုတင်ပေါ်မှာ ရုန်းလို့တဲ့ ကြိုးတွေနဲ့ တုပ်ထားတယ်.။ သွေးအိုင်ထဲမှာ အဝတ်တွေဆို သွေးတွေနဲ့ ရွဲနေတာပဲ...။
ကျနော်တို့ရောက်သွားမှ အုပ်လိုက်တွေ ၊ အုပ်လိုက်တွေ လက်ထဲ...အဲ..မုန့်ပုံးထဲ ထည့်ပေးလိုက်တော့မှ နားကြပ်ကိုင်တာဗျ.။
ဒါကို ကျနော် အရှည်မရေးချင်တော့လို့. ကိုယ်တွေ့ကြုံပါစေလို့ ရေးလိုက်တာပါ.။
သူ့မျက်မြင်ဖြစ်စေချင်တာပါ.။ သူ့သားသမီးဖြစ်ပါစေလို့ မဆိုလိုပါဘူး.။
ကျနော်လည်း ဆရာဝန်တွေဘက်က ပို့စ်တွေ တင်ဖူးပါတယ်.။ ဒီမှာပါ.။
လေးစားရသော Dr, Nay Oo လည်းကြားဖူးမှာပါ.။ တရားပြသော ဘုန်းကြီးလိုလေ.သူများတွေသေတော့ တရားလေးပြနေတာ..သူ့အမေသေတော့ ချုံးပွဲချငိုတယ် ဆိုတာမျိုးလေ..။ ဒါကြောင့် ကျနော်က သူ့ကို လေးစားသော အားဖြင့် မျက်မြင်လေး ဖြစ်စေချင်တာပါ..။
ဒါကို အတိုဆုံးရေးလိုက်တော့ ကျနော်လည်း လေးစားရပါသော Dr, Nay Oo ရဲ့ မေတ္တာတွေ ရလိုက်တာပါပဲ..။
ဆရာလည်း ကျနော်လို့ ကြူံရင် သိမှာပါပဲ..။
ဒီနေရာလေးကို ကျနော် သူငယ်ချင်း ဆရာဝန်က ပေးလို့သိတာပါ..။
ကျနော်က ဘာမှတော့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ..။
both doctors and population have to change.
I disagree with "tune" comment "i never heardadoctor kickedapatient out ofaclinic for asking questions or contradicting his or her decisions."
I did hear! Okay? Of course, they never kicked out? Should to be kicked out? YES, they shouted !!!! Patient just had to zip his mouth !!!!! >.<
ကိုဇော်ပြောတာ ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ တစ်ချို့ OG တွေဆိုရင် တပြိုင်တည်းတောင် လူနာနှစ်ယောက်ကြည့်သေးတာ။ လူနာတွေကို အခုထက်အချိန်ပိုပေးသင့်တယ်ထင်ပါတယ်။ သူတို့က ရှေ့ကနေပြီး ပေါက်တတ်ကရတွေလုပ်ပြနေတော့ နောင်လာနောက်သားဆရာဝန်တွေအတွက် ရင်လေးစရာပဲ
ခောတ်ကြီးကပြောင်းလဲတာ သိပ်မြန်လာတယ်။ သင်ယူစရာတွေကလည်း ကုန်ကို မကုန်နိုင်ဘူး။ ပညာတွေသင်ဖို့အတွက်တင် ရင်းရတဲ့အရင်းအနှီးက မနည်းပါဘူး။ ၂၀၀၈ တုန်းက ဘွဲ့ရတဲ့ MBBS တစ်ယောက်ဟာ ၂၀၀၉ မှာ သူသင်ခဲ့တာတွေရဲ့ တစ်ဝက်လောက်က မမှန်တော့ပါဘူး။ ပြောင်းလဲကုန်ပါပြီ။ လူဆိုတဲ့သဘောက ကိုယ်က အရင်းအနှီးများများစိုက်ထုတ်ရလေလေ အမြတ်ပြန်လိုချင်လေလေပါပဲ။ မြန်မာပြည်မှာ လူနာတစ်ယောက်ကြည့်ခက နိုင်ငံတကာနဲ့ ယှဉ်လိုက်ရင် တော်တော့်ကိုနည်းပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဆရာဝန်တွေက လူနာကြည့်ခကို မတင်ဘဲ ကြည့်ချိန်ကို လျော့တဲ့နည်းလမ်းကို သုံးပြီး တွက်ချေကိုက်အောင် လုပ်ကြတယ်။ ကြာလာတော့ လူတွေကို တန်ဖိုးမထားတတ်ကြတော့ဘူး။ လူနာတွေကို တွေ့ရင် ထောင်တန်လေးတွေလွင့်လာတယ်လို့ပဲ မြင်နေကြတယ်။ ဒါက လူ့သဘာဝပါ။ လက်တွေ့ကျတဲ့ အဖြေကို စဉ်းစားကြည့်ရင် ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ လက်ရှိ ဥာဏ်ပူဇော်ခအတိုင်းယူပြီး လူနာတွေကို အချိန်ပိုပေးဖို့ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်ဖို့ ပိုမိုခဲယှဉ်းပါတယ်။ လူနာကြည့်ခကို ပိုပြီးတိုးယူမလားဆိုတော့ လည်း ပြည်သူတွေက လိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ တကယ်ဘေးကျပ်နံကျပ်အခြေအနေပါ။ ဆရာဝန်တွေကို ငွေမျက်နှာနောက်မလိုက်ရဘူးဆိုတဲ့ ကျင့်ဝတ်ကြီးနဲ့တော့ မကိုင်ပေါက်ပါနဲ့။ အဝေးသင်ကိုတောင် တဖုန်းဖုန်းကျပြီး စာမေးပွဲအောင်လာတဲ့ကောင်တွေက တစ်လကို ၄ ၅ ၆ သိန်းဝင်နေပြီး ဆရာဝန်ကျတော့ တစ်လကို ၂ သိန်း ၃သိန်းပဲယူဆိုတော့ ဘယ်တရားပါ့မလဲ။ တစ်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်း လူ့အသက်နဲ့ ရင်းပြီးလုပ်ရတာ ပေါ့ပျက်ပျက်လုပ်လို့ကလည်း မဖြစ်။ ခက်၏
'You never heardadoctor kickedapatient out ofaclinic for asking questions or contradicting his or her decisions'...?
Are you in Myanmar or staying oversea?
May be you have never never visit those specialists who only pay less than one minute for one consultancy. You even don't have time to move your lips to ask about what you want to know. They are no longer treating their patients in professional way. I believe they think more of income. Do you know we paid 5000 kyats for one consultancy fee. It is considered very expensive in Myanmar while most of the general people earn 50,000 kyats per month in average.
I wonder you never know all these real situations in those specialist clinics.
I experienced one time, one specialist replied me that everything is written in my health record book when I asked him. He never answer me what I really want to know. It is more painful in my heart than kicking me out of the clinic for asking question. I am so sad that when I realise how many people having those kind of treatments from specialists every day.
I believe the root cause of current concerning case is that I repeat 'specialists never pay enough investigation time on their patients in pre-operation or pre-making decision. We can not rely on 100% health equipments or instruments. We need to know how often they are calibrated to get correct result. Who is the responsible parties to check they are compliance with international standards or so many things we need to know.
So let focus on finding root cause of sad loss instead of blaming journals that perform their work as the other professionals do.
It is notaright time to blame journals for revealing true story to public.
I amapeofessional. But I stay on the side of public who mostly are general people but not professionals.
ဒီ Post မှာ ဖော်ပြခဲတဲ့ ဆေးပညာအကြောင်းတွေကြောင့် မကြာခဏ၀င်ကြည့်ခဲ့သလို ဆေးပညာဗဟုသုတတွေလည်း ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ "မြန်မာ့ သတင်းမီဒီယာအချို့ စည်းဘောင်လွတ်နေခြင်း" ဆောင်းပါးကြောင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးစရာဖြစ်သွားပြီး ဒီPostကို လူတွေပိုသိ၊ ပိုနာမည်ကြီးလာတာမှန်ပေမဲ့ Post ရဲ့ မူလရည်ရွယ်ချက် မပျောက်သွားစေချင်ပါဘူး။ ဖြစ်ရပ်အမှန်တွေနဲ့ မကင်းကွာစေချင်ပါဘူး။ "မြန်မာ့ သတင်းမီဒီယာအချို့ စည်းဘောင်လွတ်နေခြင်း" ဆိုတဲ့ ဒီခေါင်းစဉ်အောက်က ဆွေးနွေးမှုအချို့ကြောင့် မီဒီယာတွေ၊ ပြည်သူတွေရဲ့ အမျက်ဒေါသနဲ့ ဒီPost ကို ထိခိုက်လာမှာ မလိုလားပါဘူး။
သတင်းစာဆရာကြီးတွေရဲ့ အပြောတွေ၊ တကယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့သူတွေက ပြောတာတွေကိုတော့ သေချာလေ့လာသုံးသပ်စေချင်တယ်။
ဒီပြသနာမှာ အဓိက ကျတာက လူတွေရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ပါပဲ။ အရေးပေါ်လူနာတစ်ယောက်ကို ချက်ချင်းခွဲခန်းဝင်ရမှာ ထုံးစံပါပဲ။ လူတစ်ယောက်သေသွားပြီးတော့မှ ဆုံးရှုံးမှုကို ခံစားပြီး အပြစ်တင်တာကို နားလည်ပါတယ်။ ဒီကလေးက ဘာကေ့စ်လည်းဆိုတာကို EMO က ဘာလို့ သတိမထားမိရတာပါလဲ။ ပြီးတော့ ဆရာဝန်တွေ ဘာလို့ အပြင်မှာ ဆေးခန်းထိုင်ရတာလဲ။ ရှင်းရှင်းလေးပါ။ အစိုးရပေးတဲ့ လစာမလောက်လို့ပေါ့။ သူများနိုင်ငံမှာ အစိုးရပေးတဲ့ လစာနဲ့ ဆေးရုံမှာ အချိန်ပြည့်နေကြတဲ့ဆရာဝန်တွေပါ။ ဒါပေမယ့် သမားတော်ထက် ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ဟာ လူနာကို အချိန်ပိုပေးပြီး ကြည့်ရှုတတ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ထည့်ပြီး စဉ်းစားရင် သူတပါးအပေါ် အတင်းအထင်သေးချင်စိတ်၊ ပြောချင်စိတ်တွေ လျော့နည်းသွားလိမ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
" အဝေးသင်ကိုတောင် တဖုန်းဖုန်းကျပြီး စာမေးပွဲအောင်လာတဲ့ကောင်တွေက တစ်လကို ၄ ၅ ၆ သိန်းဝင်နေပြီး ဆရာဝန်ကျတော့ တစ်လကို ၂ သိန်း ၃သိန်းပဲယူဆိုတော့ ဘယ်တရားပါ့မလဲ။ "
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတစ်ယောက် ဒီလိုစကားမျိုးထွက်လာတာကို အံ့သြစွာနဲ့ဖတ်လိုက်ရပါတယ်။
နပ်စ်မလုပ်တဲ့အမတစ်ယောက်ကို ဘာလို့လုပ်တာလဲမေးတော့ ဒီခေတ်မှာ နပ်စ်က၀င်ငွေရှာရ ပိုလွယ်လို့လို့ပြောတာကြားဘူးပါတယ်။
အရင်ဆုံး ကိုဘာလိုချင်တာလဲ စီစစ်သင့်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံလိုချင်တာလား လိုချင်ရင် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းမလုပ်သင့်ပါဘူး စီးပွားရေးသမားလုပ်ပါ။ တရားလိုချင်ရင် ဘုန်းကြီးဝတ်ပါ။ လူတွေရဲ့ကျန်းမာပျော်ရွှင်မှုကို မြင်ချင်တဲ့စိတ်စေတနာကောင်းကိုလိုချင်မှ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းလုပ်စေချင်ပါတယ်။ လူ့ကျန်းမာရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး စီးပွားရှာတာတော့ အမတန်မှ စိတ်ဓါတ်နိမ့်ကြပါတယ်။ ဆရာဝန် ကျောင်းဆရာ တွေက လူတွေရဲ့ စေတနာမေတာနဲ့ ကျွေးမွေးတဲ့ ထမင်းကိုပဲစားသင့်ပါတယ်။ ပညာရေး ကျန်းမာရေးဟာ စီးပွားရှာစရာအလုပ်မဟုတ်ပါဘူး။ နာသုံးနာမရှိရင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းမလုပ်တာအကောင်းဆုံးပါ။
စာနယ်ဇင်းသမားတွေအကျင့်ပျက်နေတယ်လို့ပြောနေကြတဲ့ ဆေးပညာအသိုင်းအ၀ိုင်းကလူများကရော လိပ်ပြာလုံကြပါရဲ့လား။
မူရင်းပို့စ်လေးကို စိတ်ဝင်တစားဖတ်တုန်းကတော့ ရေးသူကိုလေးစားမိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပို့စ်ပေါ်ကိုရောက်လာတဲ့ မှတ်ချက်တွေကို စာရေးသူတုံ့ပြန်ပုံတွေကိုဆက်ဖတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ စာရေးသူရဲ့ ပညာအရေအချင်းနဲ့ စိတ်ဓါတ်အဆင့်အတန်းဟာ သိသိသာသာကြီးကွဲပြားနေတာကိုသိလိုက်ရလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။
ကို ဒေးဗစ် ရေ...
အခု ကျွန်တော်တို့ ပြောနေကြတာ သူတပါးအပေါ် အထင်သေးချင်စိတ်၊ ပြောချင်စိတ်ကြောင့် မဟုတ်ဘူး။
အစိုးရလစာနဲ့မလောက်လို့ အပြင်မှာဆေးခန်းထိုင်တာ မှန်တယ်။ ဆရာဝန်တွေလဲ လူတွေပဲလေဗျာ။ ဒါကိုသဘောပေါက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပြောနေကြတာ Professional ဆန်မှုပါ။ တောင်းဆိုနေတာလဲဒါပဲ။ သူများနိုင်ငံမှာ ဘယ်လောက်ရတာဆိုတာကို လာမပြောပါနဲ့။ ဒီနိူင်ငံမှာ အများဆုံးငွေကြေးတွေ အထူးကုဆေးခန်းတွေက ရနေကြပြီပဲ။ ပြည်သူတွေ ငွေထုပ်ပိုက်ပြီး ဆေးခန်းလာနေကြပြီပဲ။ ဒီအတွက် ဆရာဝန်တွေ ကျေးဇူးသိပြီး Professional ဆန်ပေးလိုက်ရုံပဲ။ ဒီလိုဆို သိပ်ကျေနပ်သွားမှာပါ။ ဒါပါပဲ။
ဆရာဝန်အလုပ်ကို စေတနာ့ဝန်ထမ်းလို့ ဘယ်သူကများပြောပါသလဲ။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအနေနဲ့ သံဃာ့ဆေးရုံမှာ အလုပ်လုပ်ဖူးပါတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန်တွေမှာ ဆေးခန်းထိုင်ပြီး ၀င်ငွေလည်း ရှာရပါတယ်။ ဆရာဝန်အလုပ်ကို professional အလုပ်လို့မြင်တဲ့အတွက် သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့ လုပ်အားခ ရရှိဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီလို လုပ်အားခမရှိရင် ပညာရှင်တစ်ယောက်ဟာ သူရဲ့ ပညာအဆင့်အတန်းကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့ခက်ပါတယ်။ ဆရာဝန်တစ်ယောက် ဘာမှ မလေ့လာဘဲ ဆေးကု၍မရပါ။ ထိုလေ့လာဆည်းပူးမှုအတွက် ဘယ်သူကမှ အလကားမသင်ပေးပါ။ ဆရာဝန်တစ်ယောက်မှာ နာ သုံးနာ ရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နာ သုံးနာ ရှိရုံနဲ့တော့ ဆရာဝန်ကောင်းတစ်ယောက် ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ ပိုက်ဆံလိုချင်ရင် စီးပွားရေးလုပ်ဆိုလို့ စီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုပါသလဲခင်ဗျာ။ အဲဒါဆိုရင် ပိုက်ဆံမလိုချင်တဲ့လူ ဘယ်သူများရှိပါသလဲခင်ဗျာ။ ရှိရင် ကျွန်တော့်ကို ခေါ်လာပြပါ။ ပိုက်ဆံလိုချင်တိုင်း လူတိုင်း စီးပွားရေးလုပ်ကြသလား။ အဲဒီလိုဆိုရင် အင်ဂျင်နီယာတွေ၊ သိပ္ပံပညာရှင်တွေတောင် ပေါ်ပေါက်လာကြမှာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တော်ဒီစကားပြောတာ ငွေစကားပြောတာမဟုတ်ဘူး။ လူရဲ့ သဘာဝကို နားလည်စေချင်လို့။ လူဆိုတာ ပညာတတ်လာလေလေ needs and wants တွေက များလာလေလေပဲ။ တကယ်လို့ ကျွန်တော့်ယူဆချက်က မမှန်ဘူးလို့ထင်ရင် ထမင်းစားရရုံဝင်ငွေရှိရင်တော်ပြီ။ လူတွေအတွက်အနစ်နာခံပြီးတစ်သက်လုံးဆေးကုပေး မယ် ဆိုတဲ့ ဆရာဝန်တွေ လောကကြီးမှာ ရှိလားဆိုတာ တစ်ချက်လောက်ရှာကြည့်ပါလား။ အမြင်ကျယ်သွားတာပေါ့။ ကျွန်တော်ဒီလိုရေးတာ အထူးကု ဆရာဝန်တွေ ကျင့်ဝတ်ဖောက်ဖျက်တာကို ထောက်ခံတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ရိုးရိုးဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ ရှုထောင့်ကနေ သုံးသပ်ပြတာပါ
အရမ်းကို ကောင်းတဲ့ ဆွေးနွေးချက်ပါပဲ....Truth နဲ့ khaing ခင်ဗျာ..။
official news မဟုတ်တဲ့အတွက် post တစ်ခုအနေုနဲ့ မရေးတော့ပါဘူး။ ဆောင်းဝင်လာတဲ့အတွက် ရန်ုကုန်မှာ H1N1 case တွေ့နှုန်းတွေပြန်တက်လာပါတယ်။ သာမန် နှာစေးချောင်းဆိုးရောဂါနဲ့ တူတဲ့အတွက် ရောဂါလက္ခဏာကို ကြည့်ပြီး ခွဲလို့မရပါဘူး။ အကောင်းဆုံးကာကွယ်ဖို့နည်းလမ်းကတော့ လူထူတဲ့အရပ်တွေကို တတ်နိုင်သလောက်ရှောင်ကြပါ။ အပြင်က ပြန်လာလျှင် လက်ကို ဆပ်ပြာနဲ့ သေချာဆေးတဲ့အကျင့်လေး လုပ်ပေးကြပါ။ ကိုယ့်ဆီက ရောဂါပိုးကြောင့် ပြည်သူတွေ နာ မကျန်းမဖြစ်စေချင်ရင် နှာစေးချောင်းဆိုးဖြစ်နေခိုက် အပြင်မထွက်ပါနှင့်။ mask တပ်ထားက ပိုကောင်းသည်။ နိုင်ငံရပ်ခြားမှ ပြန်လာသူတို့နဲ့ ထိတွေ့နေရသူဆိုပါက အထူးဂရုစိုက်ပါ။
"ထမင်းစားရရုံဝင်ငွေရှိရင်တော်ပြီ။ လူတွေအတွက်အနစ်နာခံပြီးတစ်သက်လုံးဆေးကုပေး မယ် ဆိုတဲ့ ဆရာဝန်တွေ လောကကြီးမှာ ရှိလားဆိုတာ တစ်ချက်လောက်ရှာကြည့်ပါလား။ အမြင်ကျယ်သွားတာပေါ့။ " ဟုတ်လား... ?
ခင်ဗျားလုပ်ပုံက တော်တော်စိတ်ပျက်စရာကောင်းတာပဲဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ ပိုမိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့ ဆွေးနွေးကြရအောင်ပါဗျာ..။
ကျွန်တော့ရဲ့ ရှုမြင်ပုံက ...."ဆရာဝန်တွေရဲ့ ပြသနာဟာ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေရဲ့ ပြသနာပဲ။" ဒါကြောင့် စိတ်အေးအေးထားပြီး ပညာ၊ အသိဥာဏ်၊ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ဆွေးနွေးပေးပါဗျာ။
ဒီ Case ကို မျမျတတ၊ အမှန်ကန်ဆုံး နဲ့ မြန်မာပြည်ဆေးလောကရဲ့ စံတစ်ခုကျန်အောင် ကျွန်တော်တို့ စောင့်ကြည့်ပံပိုးပေးရအောင်ဗျာ။ ဘယ်သူမှမသာစေရဘူး။ ဘယ်သူမှလဲ မနာစေရဘူး။ အမှန်ကို အမှန်အတိုင်းဖြစ်အောင် ၀ိုင်းပြီးစောင့်ရှောက်ပေးရအောင်။
ကျွန်တော်တို့ အနာဂတ်အတွက် အခုဆွေးနွေးကြရအောင်။ ဆရာဝန်တွေဟာ ပညာတတ်ရုံမဟုတ်ဘဲ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ အသိပညာရှိသူလို့ပါ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ ယုံကြည်လက်ခံ ချင်တယ်ဗျာ။
ဆရာဝန်က စေတနာဝန်ထမ်းမဟုတ်ရင် အသပြာဝန်ထမ်းလားသိချင်ပါတယ်။
Florence Nightingale ပါ
ဆရာပြောတဲ့ needs and wants တွေများလာလို့ ဒီလိုလူမျိုးတွေဟာ ပုံပြင်ထဲက မင်းသမီးလေးလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။
ကိုယ်လုပ်သလောက် လုပ်ကြောင်း ဟောင်ဖွာဖွာမပြောတတ်တဲ့လူတွေဟာ ၁၀၀မှာ ၁ယောက်သာ လူသိရှင်ကြားဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဆရာဝန်ကြီးအနေနဲ့ မကြားဘူးဘူးဆိုလို့ ထင်ရှားကြော်ကြားတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုပဲ ဥပမာပြလိုက်တာပါ။
မထင်မရှားနဲ့ စေတနာအရင်းခံပြီး ငွေနောက်မလိုက်ပဲ မြို့ရွာတွေမှာ ဆေးကုသပေးနေတဲ့ ဆရာဝန်တွေ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရိုက်သတ်လို့တောင်မကုန်ပါဘူး။
ဥာဏ်ပူဇော်ခနဲနဲနဲ့ စေတနာပါပါကုပေးတဲ့ ရပ်ကွက်တွေထဲက ဆေးခန်းမှုန်ကုပ်ကုပ်လေးတွေမှာ လူနာတွေ တန်းစီနေတာ မမြင်ဘူးဘူးထင်ပါတယ်။
ဆရာ့အနေနဲ့ အတော်အားနေပုံလဲရပါတယ်။ ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေတစ်ခုချင်းစီကို ပြန်လည်တုန့်ပြန်ဖို့ အချိန်တွေရှိနေပါတယ်။
ဒီအချိန်တွေကို ဆေးပညာစာအုပ်လေးများရှာပြီးဖတ်လိုက်ရင် အတော်ကိုအကျိုးရှိသွားပါလိမ့်မယ်။
ပညာဆိုတာလဲ ငွေကုန်မှမဟုတ်ပါဘူး ယူတတ်ရင်ရပါတယ်။
အင်ဂျင်နီယာတစ်ယောက် ပိုက်ဆံမပေးရင် တိုက်မဆောက်ဘူးလို့ နေလို့ရပါတယ်။
သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ယောက် ပိုက်ဆံမရလို့ကတော့ ဘာ research မှမလုပ်ဘူးနေလို့ရပါသေးတယ်။
ဆရာဝန်တစ်ယောက် ပိုက်ဆံမပေးရင် သေပစေ လုံးဝမကုဘူးလို့ နေလို့မရပါဘူး။
“Need နဲ့ Want ” ဆိုတာ မကြားဖူးဘူး..။
“ Need နဲ့ Deed ” ပဲ ကြားဖူးပါတယ်.။
Plz don't lecture me about စေတနာ့ဝန်ထမ်း. I am now working asavolunteer medical doctor at project for vulnerable and street children jointed formed by unicef and YMCWA. ok? There is some misunderstanding about my writing. These doctors that u described are ususally retired old doctors, who do not need money anymore and want to do good deed. that's all. I had been working with them forawhile and i know about them. They are not doing only charity works after graduated from medical school. They also had to earn their living. When we talk about something, numbers are important. There are only ten thousands doctors in our country. You can make an interview to them. I am curious that who will answer that they don't want pay for their work, only good deed? Everybody wantsafair days' pay forafair day's work. Are doctors exceptions? Medical schools are not producing saints or martyrs. They are producing professional health officers who continue their life long learning. To do that, Doctors need enough income to continue studying and treat the patients the same time. Again, I have to remind u that I am not telling about specialists, only for ordinary doctors.
http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow%27s_hierarchy_of_needs အဲဒီ Link မှာ needs and wants အကြောင်းဖတ်လို့ရပါတယ်။ basic psychology ပါ။ florence nightingale ဟာ social worker ပါ။ professional မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒိတော့ သူမအကြောင်းကို ပြောလို့မရပါဘူး။
ရပ်ကွက်ထဲက ဆေးကုတယ်ဆိုတဲ့ ဆရာဝန်လည်း သူထိုက်တန်တဲ့ဥာဏ်ပူဇော်ခကို ယူတာပဲလေ။ သေရေးရှင်ရေးမဟုတ်ရင် ဒါမ မဟုတ် ငွေကြေးလုံးဝမတတ်နိုင်တဲ့သူမဟုတ်ရင် ဘယ်သူကိုမှ အလကား မကုပေးတာ။ စေတနာဆိုတာ ဆရာဝန်တစ်ယောက်အတွက် အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စေတနာရှိရုံထဲနဲ့ကတော့ အလုပ်မဖြစ်ဘူးလေ
needs and wants ရဲ့ သဘောတရားတွေ လူဆိုတာ ပညာတတ်လာလေလေ needs and wants များလာလေလေ ဆိုတာ မယုံရင် မိတ်ဆွေကြိုက်တဲ့ business school က စာသင်တဲ့ဆရာတွေ management ဒါမ မဟုတ် eco နဲ့ ကျောင်းပြီးတဲ့သူတွေကို မေးကြည့်ပါ။ တစ်ခုတော့ ရှိတာပေါ့နော်။ သေချာတတ်တဲ့သူတော့ ဖြစ်ပါစေ။ professional ပညာတွေသင်လာပြီး professional အဆင့်မရှိတဲ့ သူတွေကို တော့ သွားမမေးမိစေနဲ့ပေါ့
မြန်မာနိုင်ငံက ဆရာဝန်တွေကို တကယ်ကောင်းစေချင်ရင် အရင်ဆုံး မိမိကိုယ်ကို ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတရှိအောင်လုပ်ပါ။ ဆေးရုံဆေးခန်းရောက်ရင် မသိတာရှိရင် မေးပါ။ ဆရာဝန် ကလုံးဝမဖြေရင် ဖြေတဲ့သူနဲ့ ပြောင်းပြီးပြပါ။ လူတွေအကုန်လုံးကသာ ကိုယ့်ေ၇ာဂါသိချင်စိတ်ဖြင့် မေးနေပါက ဆရာဝန်များ အချိုးပြောင်းလာပါလိမ့်မည် ။ ဒါက ဘယ်သူ့ကို မှ တိုက်ခိုက်စရာမလိုဘဲ တကယ်လဲ အကျိုးရှိမည့် နည်းလမ်းပါ။ ကိုယ့်အားကိုကိုးဖို့တော့ လိုတာပေါ့။ သူများကိုပဲ အားကိုးနေလို့ မဖြစ်တော့ဘူး။ ဆ၇ာဝန်တွေမယုံရဘူးဆိုရင် ပြောတာပါ။
ကျွန်တော့် ကိုယ့်ပိုင်အချိန်ကို ကျွန်တော် အသုံးချချင်သလို အသုံးချပါမည်။ မိတ်ဆွေ ဝေဖန်ပိုင်ခွင့်မရှိပါ။
ဒီအကြောင်းဝင်ရောက် ဆွေးနွေးထားသူအားလုံးနီးပါးဟာ ဆရာဝန်-လူနာဆက်ဆံရေးကို ဈေးသည်-ဈေးဝယ်ဆက်ဆံရေးမျိူးသဘောထားတယ်လို့ နားလည်ထားမိပါတယ်။ ဈေးဝယ်အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးအဆင့်ကုသရေးကို ဈေးအနိမ့်ဆုံးလိုချင်ကြတာ ထုံးစံတခုပါ။ ဒီလိုမျိူးလိုချင်ကြတာကိုတော့ အပြစ်မပြောလိုပါ။
ကျနော်လက်ခံထားတာကတော့ ပစ္စည်းကောင်းလျှင် ဈေးမသက်သာ၊ ဈေးသက်သာလျှင်ပစ္စည်းမကောင်း၊ ဈေးသက်သာပြီးပစ္စည်းကောင်းလျှင် ကြာရှည်မရောင်းနိုင်(ရောင်းသူ ဆိုင်ပြုတ်)၊ ကြာရှည်အသုံးမခံ။
မည်သည့် Professional မဆို ၊ Professional ဈေးရှိမှသာ ထိုသက်ဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင် တိုးတက်မှုရှိလာနိုင်ပါသည်။ ဥပမာပြရလျှင် မြန်မာ ဂီတ၊အနုပညာ သည် Professional ဈေးမရသဖြင့် (အခြားအကြောင်းအရာများတွင် ခိုးကူးဒန်ကို မကာကွယ်နိုင်သဖြင့်) မည်သူမျှကြိူးစားချင်စိတ်မရှိကြပါ။ မည်သည့် Professional မဆို ဈေးပေါပေါဖြင့် ရောင်းလေ့မရှိကြပါ။ မည်သည့် Professional သမားမှလဲ incentive မရှိဘဲအလုပ်မလုပ်ပါ။
သတင်း အချက်အလက် သိရှိနိုင်စေဖို့
မန်မာများအလွန် အထင်ကြီးသော စင်ကာပူကို ဥပမာအဖြစ်ထားပါအမည်။ စင်ကာပူစတင်တည်ထောင်ချိန်က စင်ကာပူ၏ဖခင် လီဘိုးဘိုး ၏လစာကို သတ်မှတ်စဉ်က တလလျှင်ဒေါ်လာ၂၀၀၀ (ဈေးနှုံးအတိအကျအမှတ်မိပါ-အကြောင်းအရာကိုသာ အလေးပေးပြီးပြောချင်ပါသည်) သတ်မှတ်ခဲံပါသည်။ သူကလက်မခံပါ။ Professional ဈေးအရ အဆများစွာပိုတောင်းခဲ့ပါသည်။ တောင်းဆိုချက်ထဲတွင် သူအလွန်ကြိုက်သော အဲကွန်းပါ ပါသည်။ သူကပြန်ပြောသည်မှာ လစာဈေးပေါလျှင် အလုပ်ကိုလျှော့လုပ်မည်။ လာဒ်လဲစားမည် ဟူပြီးဖြစ်သည်။ ယခု ထို Professional လီကွမ်းယု ကြောင့် မြန်မာများ အလွန်အထင်ကြီးကျသော စင်ကာပူကိုတွေမြင်နေရပါပြီ။
forward mail တစ်ခုပါ။ ပ၇ိသတ်များ ဖတ်ရှုနိုင်ရန် link ပေးလိုက်ပါသည်။
မည်သည့် Professional ကိုမဆို ဘယ်ဈေးယူပါ၊ ဘယ်ဈေး မယူနဲ့ ဟူပြီးမည်သူမျှသတ်မှတ်ခွင့်မရှိပါ။ Professional Service ဆိုသည်မှာ ရောင်းကုန် တခုဖြစ်သဖြင့် ဈေးကွက်က ဈေးနှုံးသတ်မှတ်သွားပါလိမ့်မည်။ တကယ်လို့ စားသုံးသူတိုင်းက မစားနိုင်လျှင် ထို Professional ထမင်းငတ်ပြီး ဈေးလျှော့ယူပါလိမ့်မည်။ လောလောဆယ် ကိုယ်မတတ်နိုင်လျှင် ၀ယ်မစားရုံသာရှိပါသည်။ Professional တယောက်ဖြစ်လာရန် ရင်းနှီးမှုများစွာကို မြုပ်နှံရပါသည်။ ဘောပင်တချောင်းဝယ်နိုင်ရုံနှင့် စာရေးဆရာမဖြစ်ပါ။ စာရေးဆရာ တယောက်ဖြစ်လာရန် သူတဦးတည်းသာမက သူ့အားနားလည်ကူညီပေးသော သူ့မိသားစု၊ပတ်ဝန်းကျင်ကပါ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွင်ပါဝင်ပါသည်။ ကျနော်သိသမျှ စာရေးဆရာများသည် Professional ဈေးမရကြပါ။ မတတ်လို့မရတာလား၊ တတ်ရဲ့သားနဲ့ မရတာလား၊ ရသင့်တယ်ဆိုတာကိုမသိလို့လား၊ သိပေမယ့် ကိုယ့်အခွင့်အရေးကိုမတောင်းရဲလို့လား ဆိုတာတော့မသိပါ။ ကျနော်တော့ တကယ်တတ်သူများကို Professional ဈေးရစေချင်ပါသည်။
မသေချင်လို့ ဆေးရုံတင်ကာမှ ~~~~ ????
ကျွန်တော် ဆက်လက် ပြီး debate မလုပ်တော့ပါ။ ပြောချင်သလောက်ပြောလို့ရပါပြီ။ လူတွေက အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို ဖြစ်ချင်တာကိုပဲ စောင်းပေးနေကြပြီး တကယ်ဖြစ်နေတာနဲ့ ဖြစ်နိုင်တာကိုမှ လက်မခံကြတာ။ ဆရာဝန်ဆိုတာ စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်ဟာ ၁၉ ရာစုမှာ ကျန်ခဲ့ပါပြီ။ ၂၁ ရာစုမှာ professional body တစ်ခုအနေနဲ့ ဖြစ်ထွန်းနေတယ်ဆိုတာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ပြောင်းလဲနေတာပါ။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံထဲက ကွက်ပြီးကျန်နေလို့မ၇ပါဘူး။ ဘယ်သူမှ အကျိုးမရှိဘဲ အမုန်းပွားမည့်အတူတူ မငြင်းတော့ဘူး။ ၁၉၅ ခုမြောက် comment ရေးခြင်းသည် ဤဆောင်းပါးအတွက်နောက်ဆုံးရေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။
So upset to read .
This is Doctor ????????????
Shame on our community with such an unbelievable comment.
စင်္ကာပူအကြောင်းသိလျှင် ... ဆေးရုံဆေးခန်းများဟာ စံနှုန်းပြည့်မှီအောင် ပိုက်ဆံရှာကြရပါတယ်။
ဆေးစစ်ပြီးပြန်အလာ လမ်းမှာ ဆေးရုံစားရိတ်မတတ်နိုင်လို့ မိသားစုအပေါ်ကိုလဲ ဒုကမပေးချင်လို့ ရထားလမ်းပေါ်ခုံချသတ်သေသွားကြသေ လူနာများအကြောင်းကိုရော ကြားမိကြပါသလား။
ဒါကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် လူ့အသက်နဲ့မဆက်နွယ်သော professional များ ပိုက်ဆံစကားပြောတာ ပြသနာမရှိပါဘူး။
ဆရာဝန် ဆရာမများ ပိုက်ဆံစကားပြောရင်တော့ အဆိုးဘက်ကိုသာဦးတည်နေပါပြီ။
စေတနာ့ဝန်ထမ်းမဖြစ်လိုသော ဆရာဝန်များ ဆရာဝန်၏ကတိသစာကိုရော မှတ်မိကြပါသလား။
ကျွနုပ်သည် Professional သမားကောင်းဖြစ်သည့်အလျောက် ထိုက်သင့်သည့်ငွေကြေးဖြင့်သာ ဆေးကုသပါမည် ဟုသောစာသားရှာမတွေ့ပါ။
ဆရာဝန်အလုပ်ဟာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လို့ 
လက်ခံပါတယ်။လူနာတယောက် ၅၀၀၀ကျပ် ..
၂ နာရီကို လူနာ ၂၀..လူနာတဦး ၆ မိနစ်..
တနေ့ ဝင်ငွေ ၁၀၀၀၀၀ ကျပ်။ ၁ လ၀င်ငွေ
သိန်း ၃၀။ ထမင်းစားလောက်ရုံနဲ့ မဖြစ်ရင် ၀င်ငွေဘယ်လောက်ထိမျှော်မှန်းလို့ ပါလဲ။
ဒီလောက်နဲ့ ပညာသင်ခမကြေလို့၂ နာရီအတွင်း
ဆရာဝန်က ၂၀ ပြည့်ရင်လုံးဝဆက်မကြည့်ရင်
မဖြစ်မနေ တခြားဆရာဝန်ဆီပြေးရမှာဖြစ်လို့ 
၂ နာရီထဲဝင်အောင်ကြည့်ဖို့ လဲမလို။
လနာ ၁၀၀ တနေ့၅၀၀၀၀၀ တလ သိန်း၁၅၀..
လူနာ ၂၀၀ တနေ့ ၁၀၀၀၀၀၀ တလ သိန်း၃၀၀..
ရှာတာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လားရှင် ။
I already stated that I write fromaordinary doctor's perspective, not specialist.
အလွန်အံ့သြစရာပါပင်။ ဆရာဝန်ကဒီလိုပြောနေမှတော့ ဆေးလောကပျက်စီးနေတာဘာမှမဆန်းပါဘူး။